လှယျအိတျကလေး – My Blog
ကိုကိုမောငျ (၇)တနျးအောငျတော့ သူ့ဦးလေးရှိရာ မန်တလေး စိနျပနျးရပျသို့ ရောကျလာ၏။ စောစောကတော့ ကြောငျးဆကျတကျရနျ စိတျကူးမရှိခဲ့။ ဦးလေးဖွဈသူ ကိုမွငျ့ဟနျက ကြောငျးဆကျထားဖို့ တာဝနျယူသဖွငျ့ သူ့အမေ မခငျဝငျးက သဘောတူလိုကျခွငျး ဖွဈသညျ။ ဦးလေးဖွဈသူ ကိုမွငျ့ဟနျမှာ သံရကြေိုလုပျငနျးဖွငျ့ ကွီးပှားနေ၏။ အလုပျရုံက သတျသတျ၊ အိမျက သတျသတျ ဖွဈသညျ။ ကိုကိုမောငျကို မန်တလေးသို့ပို့ခွငျးမှာ ကြောငျးဆကျထားဖို့ မဟုတျဘဲ အသကျမှေးဝမျးကြောငျးအလုပျတဈခု သငျကွား ရနျဖွဈသညျ။ ဒီရောကျမှ အစီအ စဉျတှေ ပွောငျးကုနျခွငျးဖွဈ၏။ ကိုမွငျ့ဟနျ မိနျးမ မနှငျးရီက ငှကေုနျမညျ့ကိစ်စမို့ သိပျတော့မ ကနြေပျ။ သို့သျော ကိုမွငျ့ဟနျကို ကွောကျရ သညျ့အတှကျ အောငျ့သကျသကျနှငျ့ နလေိုကျရသညျ။ကိုကိုမောငျကလညျး သူ့ဦးလေး မိနျးမ မကနြေပျမှနျး ရိပျမိသညျ။ ထို့ကွောငျ့ မနှငျးရီနှငျ့ အဆငျပွအေောငျ ပေါငျးရမညျကို နားလညျ လိုကျသညျ။
ကြောငျးဖှငျ့ဖုိ့က တဈလခှဲလောကျလိုသေး၏။ ထို့ကွောငျ့ အလုပျရုံနှငျ့ အိမျ ကူးခညျြသနျးခညျြလုပျကာ မနှငျးရီ တာဝနျမြား ကို ဝိုငျးကူလုပျပေးသညျ။ မပငျြးမရိ မခိုမကပျ လုပျကိုငျပေးတတျသဖွငျ့ တဈပတျအတှငျး မနှငျးရီက သူ့ကို သဘောကသြှားသညျ။ မ နှငျးရီက အိမျဆိုငျဖှငျ့ထားသညျဖွဈရာ လိုအပျသောပစ်စညျးမြားကို ဈေးခြိုသို့ သှားဝယျပေးရသညျ။ ကိုကိုမောငျ မရောကျခငျက ဖတျဖတျမောအောငျ လုပျခဲ့ရသော မနှငျးရီ တဈယောကျ ယခုတော့ တဝကျမက သကျသာနသေဖွငျ့ ကိုကိုမောငျ့အပျေါ သဘောကြ ကွညျဖွူနသေညျ။ ကိုကိုမောငျ လုပျကိုငျပေးသမြှကို လုပျအားခဟု သဘောထားကာ ကြောငျးမုနျ့ဖိုးအဖွဈ ယခုကတညျးက စုပေး ထား၏။ ဦးလေးဖွဈသူ ကိုမွငျ့ဟနျမှာ မနကျမိုးလငျးသညျနှငျ့ အလုပျရုံထှကျသညျ။ ည မိုးခြုပျမှ ပွနျလာလရှေိ့ သညျ။ မြားသောအားဖွငျ့ ည ကိုးနာရီခှဲ ဆယျနာရီမှ ပွနျလာလရှေိ့သညျ။ သညျတော့ ကိုကိုမောငျ တဈယောကျ မနှငျးရီအတှကျ အ ကောငျးဆုံး ကူဖျောလောငျဖကျဖွဈလာသညျ။ ပွီးတော့ သူတို့မှာ သားသမီးမထှနျးကားသဖွငျ့ ကိုကိုမောငျကို သားတဈယောကျ သဖှယျ သဘောထား ဆကျဆံလာသညျ။
ကြောငျးစဖှငျ့သညျ့နကေ့ မနှငျးရီကိုယျတိုငျ ကြောငျးလိုကျအပျသညျ။ မနှငျးရီက သူနှငျ့ရငျးနှီးသော ကသှေယျမိုးနှငျ့ ကိုကိုမောငျကို မိတျဆကျပေးပွီး လိုအပျသော အကူအညီမြားပေးရနျ အတနျတနျမှာခဲ့၏။ ကသှေယျမိုးကလညျး (၇)တနျးအောငျ (၈)တနျးတကျရ မညျ့သူ ဖွဈရာ တောသားလေး ကိုကိုမောငျအဖို့ အစစအရာရာ အဆငျပွသှေားသညျ။ မနှငျးရီက အပွနျတှငျ ကသှေယျမိုးကိုပါ မုနျ့ဖိုးငါးရာပေးခဲ့ သညျ။ (မှတျခကျြ။ ။ ထိုစဉျက ဆနျတဈပွညျ (၁၂၅)ကပျြ ခနျ့သာရှိသေးသညျ။) ကိုကိုမောငျ့ကို အကွောငျးပွု၍ မုနျ့ဖိုးငါးရာရသ ဖွငျ့ ကသှေယျမိုး တဈယောကျ ကိုကိုမောငျ့အပျေါ ငယျပေါငျးသဖှယျ ခငျမငျရငျးနှီးသှားသညျ။ လိုအပျသညျ့ အကူအညီမြားကို စတေနာ ထကျသနျစှာ အကူအညီပေးသညျ။ နောငျလညျး ရလာဦးမညျ့ အခှငျ့အရေးမြားကို မြှျောမွငျကာ ကိုကို မောငျကို သူ့လူအဖွဈ သတျမှတျ လိုကျတော့၏။ထိုနမှေ့စ၍ သူတို့နှဈယောကျမှာ သှားအတူ စားအတူ တပူးတှဲတှဲဖွဈခဲ့ကွသညျ။
တက်ကသိုလျရောကျတော့လညျး အတူတူပငျ ကသှေယျမိုး မိဘမြားက သာမနျလကျလုပျလကျစားတှမေို့ စားနိုငျသောကျနိုငျရုံသာရှိ ကွ၏။ ကသှေယျမိုး အဖကေ မွငျးလှညျးမောငျး သညျ။ ကိုကိုမောငျ့ ဦးလေး အလုပျရုံက ပစ်စညျးမြားကို ကသှေယျမိုး အဖကေပငျ ဒိုငျခံသယျပို့ပေးရ၏။ ကသှေယျမိုး အမကေတော့ ကမျး နားဈေးမှာ ကုနျစိမျးရောငျးသညျ။ မနှငျးရီနှငျ့ ရှာဆှရှောမြိုးဖွဈသညျ။ မ နှငျးရီက မန်တလေးဇာတိမဟုတျ။ အထကျ ကသာဖကျမှဖွဈသညျ။ ဈေးရောငျးရငျး သူ့ဦးလေးနှငျ့ ညားကွခွငျးဖွဈသညျ။ ထို့ကွောငျ့ လူကွီးခွငျး ခငျမငျရငျးနှီးကွပွီးဖွဈ၏။ သို့သျော ရပျကှကျခွငျးခွား၏။ တဈပွကြျောကြျောခနျ့ဝေးသညျ။ ကသှေယျမိုးနှငျ့ ကိုကိုမောငျတို့မှာ တဈနှဈထကျ တဈနှဈ ရငျးနှီးလာကွသညျ။ တဈဦးကို တဈဦး သံယောဇဉျလေးတှေ နှောငျဖှဲ့လာကွသညျ။ဤသို့ဖွငျ့ (၁၀)တနျးအောငျပွီး တက်ကသိုလျ ဒုတိယနှဈတှငျ မနှငျးရီ တဈယောကျ သားအိမျကငျဆာနှငျ့ ကှယျလှနျသှားသညျ။ မိဘ သဖှယျ သံယော ဇဉျတှယျခဲ့ရသူ ကိုကိုမောငျ တဈယောကျ အတျောလေး နှမွောတသ ဝမျးနညျးပူဆှေးခဲ့ရသညျ။ ဦးလေးဖွဈသူမှာ လညျး သောက ပရိဒဝေ စိတျဖွငျ့ အရကျတှေ ဖိသောကျလာသညျ။ လုပျငနျးကလညျး အတျောလေးဖွဈထှနျးသညျ။ သညျကွားထဲ ခြဲက တဈသောငျးဖိုး ပေါကျလိုကျသေး၏။ ခြဲ တဈသောငျးဖိုး ပေါကျပုံ က ဂမ်ဘီရဆနျ၏။ မနှငျးရီ ကှယျလှနျပွီး (၄၅) ရကျ အရောကျ တှငျ ကိုကိုမောငျ အိပျမကျ မကျ၏။ အဒျေါဖွဈသူ မနှငျးရီက အိပျမကျထဲတှငျ သူ့အမအေရငျးဖွဈနေ၏။
အခုလို မထငျမှတျဘဲ သားနှငျ့ခှဲရတာကို ရငျနာလို့မဆုံးဖွဈရကွောငျး။ သို့သျော အမကေ အမွဲစောငျ့ရှောကျ သှားမှာဖွဈကွောငျး။ မီးဖိုခနျး ကွောငျအိမျအောကျဆုံးထပျရှိ အံဝှကျထဲတှငျ ငှသေုံးသောငျးရှိကွောငျး။ (၂)သောငျးကို သံဃဒါနဆှမျး လောငျး၍ ကနျြတဈ သောငျးကို အမပေေးတဲ့ ဂဏနျးကို ထိုးဖွဈအောငျ ထိုးစခေငျြကွောငျး အတနျတနျမှာပွီး ပြောကျကှယျသှားသညျ။ သူ ပေးတဲ့ ဂဏနျးက (၃၄၃) (၁၆-၇-၂၀၀၆) ဖွဈသညျ။ မနှငျးရီ ပြောကျကှယျသှားသောအခါ ကိုကိုမောငျက အျောဟဈငိုယိုပွီး နောကျက ပွေး လိုကျသညျ။ “ အမေ…အမေ…အမရေေ…အမေ…”အခနျးထဲက အျောသံကွား၍ ကိုမွငျ့ဟနျ လနျ့နိုးကာ ကိုကိုမောငျ့ အခနျးထဲ ရောကျလာသညျ။ မကျြရညျတှကေ စီးကနြပွေီး အိပျမကျ ထဲ ယောငျအျောနမှေနျးသိသှား၍“ ကိုကိုမောငျ…ဟေ့…ကိုကို မောငျ”လကျမောငျးကိုပုတျပွီး နှိုးလိုကျ၏။ ကိုကိုမောငျ ဝုနျးကနဲထထိုငျသညျ။ မကျြလုံးကို ပှတျသပျကွညျ့တော့ ဦးလေးဖွဈသူက ခုတငျပျေါ သူ့ဘေးတှငျရောကျနသေညျ။“ ဟာ…ဦးလေး…အိပျမကျ မကျနတောဗြ…”ကိုကိုမောငျက သူမွငျသမြှကို အပွညျ့အစုံ ပွောပွလိုကျသညျ။ နာရီကွညျ့လိုကျတော့ နံနကျ (၃)နာရီခှဲရှိနပွေီ။
ကိုကိုမောငျ့ အိပျမကျ ကွောငျ့ ကိုမွငျ့ဟနျမှာ သူ့မိနျးမကို ပိုပွီးသတိရမိသညျ။ ကိုကိုမောငျကို ပွနျအိပျခိုငျးပွီး ညကလကျကနျြ အရကျကို သောကျရငျး သူ့မိနျးမ အကွောငျးတှထေိုငျတှေးရငျး မိုးလငျးခဲ့သညျ။ အိပျမကျအတိုငျး ကွောငျအိမျထဲရှာကွညျ့ရာ ငှသေုံး သောငျး တကယျတှရေ့၏။ မနှငျးရီ မှာ သညျ့အတိုငျး ဆှမျးလောငျးသညျ။ ခြဲထိုးသညျ။ အမှနျတကယျလညျး ပေါကျခဲ့သညျ။ နောကျ တဈရကျတှငျ ကိုမွငျ့ဟနျက ကိုကိုမောငျ့ အမကေို လှမျးမှာသညျ။ သကျဆိုငျရာ ရပျကှကျလူကွီးမြားရှမှေ့ောကျတှငျ စာခြုပျစာတမျး နှငျ့တကှ ကိုကိုမောငျကို တရားဝငျ မှေးစား လိုကျတော့သညျ။ (၁၅)ရကျခနျ့နပွေီး မပွနျခငျတဈရကျအလို ညတှငျ“ ငါ့မောငျ…မငျး လညျး အရကျတှသေိပျမသောကျပါနဲ့ကှယျ…ကနျြးမာရေးလညျး ဂရုစိုကျပါဦး…အမ ရောကျကတညျးက မငျးကို အကဲ ခတျနတော မငျးသောကျပုံက သိပျလှနျလှနျးနတေယျ…အမကတော့ အိမျထောငျပွုစခေငျြတယျ…အခုမှ (၃၉)နှဈရှိသေးတာပဲ…စီးပှားရေး က လညျး ပွညျ့စုံနတေဲ့ဥစ်စာ…အထိနျးအကှပျမရှိရငျ ဒီထကျပိုဆိုးသှားမယျ…” ကိုမွငျ့ဟနျ တဈယောကျ သူ့အမ ပွောတာကို နားထောငျနေ၏။ ဘာမှတော့ ပွနျမပွော။ သို့သျော သူ့မကျြနှာတှငျ ပွုံးယောငျသမျးနေ ၏။ ကိုကိုမောငျ့ အမပွေနျသှား၍ (၃)လ မွောကျ အရောကျတှငျ ကိုမွငျ့ဟနျ တဈယောကျ မုံရှာဘကျ ခရီးထှကျရာမှ အပွနျ မိနျးမတဈ ယောကျပါလာသညျ။
နာမညျက မဝဝေခေိုငျ ဟုချေါသညျ။ အသကျက (၂၉) (၃၀) ဝနျးကငျြသာရှိသေး၏။ ခြောခြော တောငျ့တောငျ့ လုံး ကွီးပေါကျလှ။ ဦးလေးက မဝဝေခေိုငျနှငျ့ မိတျဆကျပေးသညျ။ တခွား ဘာမှအထှအေထူးမပွော။ ထိုနမှေ့စ၍ မဝဝေခေိုငျသညျ ဦးလေး၏ ဇနီး မယားအဖွဈ ရောကျရှိသှားပါတော့သညျ။ ကိုကိုမောငျနှငျ့ ကသှေယျမိုးတို့မှာ နှုတျကဖှငျ့မပွောကွသညျ့တိုငျ အတှငျးစိတျက တဈ ယောကျကိုတဈယောကျ ခဈြကွိုကျနကွေ သညျ။ (၈)တနျးမှစ၍ ယခုတက်ကသိုလျနောကျဆုံးနှဈအထိ အတူသှား အတူစား အတူလာ မို့ သူငယျခငျြးတှရေော နှဈဖကျမိဘမြားကပါ သဘောတူထားပွီးဖွဈသညျ။ ယနေ့ ကြူရှငျစာတှေ အပွနျအလှနျကူးကွရနျ ကေ သှယျမိုး တဈယောကျ ကိုကိုမောငျ့ထံ သှားဖို့ ဖီးလိမျးပွငျ ဆငျနေ၏။ စိတျကူးလေးယဉျ သီခငျြးလေးတအေးအေးနှငျ့ ဖွဈသညျ။ သူ့ အမနှေငျ့ အဖတေို့ကလညျး ကြောကျဆညျဖကျ ဘုရားဖူးသှား ကွသဖွငျ့ အိမျမှာ သူတဈယောကျထဲရှိသညျ။ (၁၀)နာရီအ ရောကျလာခဲ့မညျဟု ကိုကိုမောငျကိုမှာလိုကျပွီးဖွဈသညျ။ အခု (၉)နာရီ (၁၅) မိနဈခနျ့ရှိနပွေီ။ တရားဝငျ ရညျးစားမဖွဈသေးသညျ့ တိုငျ ခဈြသူအဖွဈ သတျမှတျထားသူမို့ ရငျတှခေုနျမိ၏။ အခုနောကျပိုငျး ကိုကိုမောငျ့ အကွညျ့တှကေ နှလုံးတုနျ ရငျခုနျသညျးထိတျ စရာတှဖွေဈသညျ။ကသှေယျမိုးကလညျး အပြိုကွီးဖားဖားဖွဈကာ အဖုအထဈအရှိုကျအဝိုကျ ကောကျကွောငျးတှကေ ပီပွငျဖှံ့ဖွိုး အလှတှတေိုးလြှကျရှိ သလို ကိုကိုမောငျကလညျး ရငျအုပျကားကားနှငျ့ မိနျးမသားတှေ စှဲမကျစသေော ယောကျြားပီသသော ရုပျလက်ခဏာတှေ ထငျရှားပျေါ လှငျလာ၏။
ကသှေယျမိုး တဈယောကျ ကြူရှငျစာအုပျတှေ လှယျအိတျထဲထညျ့နစေဉျ စဈကိုငျးတှငျနသေော သူ့အမ ယောကျြား ထှနျးထှနျး ရောကျလာ၏။ ထှနျးထှနျးက အသကျ(၃၀)ခနျ့ရှိပွီ။ သူ့အမထကျ (၅)နှဈခနျ့ကွီးပွီး ကသှေယျမိုးထကျ (၁၀)နှဈခနျ့ကွီးသညျ။ ထမငျးစားခြိနျမို့ ထမငျးပွငျပေးရသညျ။ သူ့ယောက်ခမတှေ မရှိမှနျးသိ၍ ထှနျးထှနျး တဈယောကျ ခယျမဖွဈသူ ကသှေယျမိုးကို ခပျ ရဲရဲပငျ ကွညျ့သညျ။ မတှရေ့တာကွာပွီမို့ ခယျမဖွဈသူ တဈတဈရဈရဈ စှငျ့စှငျ့ကားကား အပြိုကွီးဖားဖားဖွဈလို့နသေညျ။ သေးသှယျသော ခါးအောကျပိုငျးရှိ အိုးကွီးနှဈမှာမှာ ဝိုငျးစကျကားထှကျနပွေီး နောကျဖကျသို့ မို့မောကျလြှကျအိစကျလုံးတဈနေ၏။ ဖွောငျ့စငျးဖွိုးတုတျသော ပေါငျတံကွီးတှကေ ထှနျးထှနျး ရငျကို လှုပျခတျစသေညျ။ ကသှေယျမိုး ဟငျးပနျးကနျနှငျ့ ပွနျ ရောကျလာ၏။ ဟငျးပနျးကနျကို စားပှဲပျေါ ငုံ့ခပြေး၏။ လညျဟိုကျအကငြ်္ီအတှငျးမှ ပွညျ့လြှံထှကျနသေော နို့အုံသားတှကေ ဖွူ ဖှေးအိထှေးနေ၏။ လှုပျရှား မှုနှငျ့အတူ နို့ကွီးနှဈလုံးမှာ တသိမျ့သိမျ့နှငျ့ လှုပျခါနသေညျ။ ရမ်မကျကွှစရာ မွငျကှငျးကို အနီးကပျမွငျ နရေသော ထှနျးထှနျး တဈယောကျ ရာဂသှေးတှေ ပူနှေးလာ၏။ အပွငျသှားဖို့ ပွငျထား ပွီဖွဈ၍ ကသှေယျမိုးကိုယျမှ မှေးရနံ့တှေ သငျးပြံ့လြှကျရှိသညျ။
ကသှေယျမိုး တဈယောကျ သူ့ကို မရိုးမသားကွညျ့နသေော ခဲအို၏ ရမ်မကျမကျြလုံးမြားကို မမွငျတှရေ့သေး။ ကိုကိုမောငျနှငျ့ တှရေ့ မညျ့ အရေးကိုသာ တှေးလြှကျ စိတျကူးယဉျကွညျနူးလြှကျရှိသညျ။ လညျဟိုကျအကငြ်္ီကိုလညျး တမငျသကျသကျရှေးဝတျခဲ့၏။ သူတို့နှဈ ယောကျ စာကကျြ စာကူးလြှငျ အိမျနောကျဖေးရှိ ပနျးစက်ကူပငျကွီးအောကျတှငျ ပွုလုပျကွမွဲဖွဈသညျ။ ထိုပနျးစက်ကူပငျ ကွီးအောကျတှငျ ဆကျတီခုံမြားရှိ၏။ စားပှဲဟိုဖကျထိပျ ဒီဖကျထိပျမှထိုငျ၍ စာကူးကွ၏။ စာငုံ့ကူးလြှငျ တငျးရငျးမို့မောကျနသေော သူ့နို့အုံဖှေးဖှေးနုနုကွီးကို ကိုကိုမောငျ မွငျတှစေ့ရေနျ လညျဟိုကျအကငြ်္ီကို တမငျရှေးဝတျခွငျးဖွဈသညျ။ “ ရော့…ထမငျးအုံး လေ ကိုထှနျး…”ကုနျလုလုဖွဈသော ထမငျးပနျးကနျထဲသို့ ထမငျးငုံ့ထညျ့ပေးလိုကျစဉျ ဝငျးမှတျနုထှတျသော နို့ကွီးနှဈမှာကို တဝငျး ဝငျး တလကျလကျ တောကျပနသေော ရမ်မကျမကျြလုံးတို့ဖွငျ့ စူးစူးဝါးဝါးကွီးကွညျ့နသေော ခဲအိုဖွဈသူ ထှနျးထှနျးကို ဖပျြကနဲမွငျ လိုကျ၏။ ကသှေယျမိုး မသိ ခငျြယောငျဆောငျနလေိုကျသညျ။ သခြောသညျထကျ သခြောအောငျ စမျးသပျလို၍ ကသှေယျမိုး တဈ ယောကျ ရအေိုးစငျရှိရာသို့ ရသှေား ခပျသညျ။ သူမ၏ ထှားကားဝိုငျးစကျသော ဖငျဆုံကွီးကို တမငျလှုပျခါအောငျ လုပျပွသညျ။ ထှနျးထှနျး တဈယောကျ ကာမရာဂတှေ တဝငျးဝငျးတောကျနသေော မကျြလုံးတို့ဖွငျ့ ကွညျ့နမေညျကို စိတျက အလိုလိုသိနေ၏။ ပို၍သခြောအောငျ“ ကိုထှနျး…ထမငျးထညျ့အုံးမလား…”ထှနျးထှနျး တဈယောကျ အငိုကျမိသှား၍ ရုတျတရကျ စကားမပွောနိုငျဘဲ ဖွဈသှားသညျ။ ပွီးတော့မှ “ အဲ…အဲ…တျော…တျောပွီဟ”ထမငျးနငျသံကွီးဖွငျ့ အထဈထဈ အငေါ့ငေါ့ပွောလိုကျမိသညျ။
“ ဦးလေးတို့က ဘယျအခြိနျပွနျလာမှာလဲ”“ ဟငျ့အငျး…ဒီနေ့ ပွနျမလာဘူး…ညအိပျမှာ”ထှနျးထှနျး ရငျထဲ ဘုရားပှဲလှညျ့သှား၏။ အသအေခြာကွညျ့လေ စှဲမကျစရာကောငျးလဖွေဈနသေညျ့ ခယျမကို ထှနျးထှနျး တဝကွီး ကွညျ့လိုကျ၏။ သူ့မိနျးမအပြိုတုနျးက ထကျ သာလှနျသောအလှပစ်စညျးတှေ တစုတဝေးကွီးရှိနကွေောငျး အကဲခတျမိ၏။ ထိုစဉျ ကသှေယျ မိုးမှာ ခြာတိတျရှိသေးသညျ။“ ကဲ…ကိုထှနျး ထမငျးစားပွီးရငျ အေးအေးဆေးဆေး နားအုံးကနြျော သူငယျခငျြးအိမျ စာသှားကူးအုံးမယျ…”“ အေးအေး…သှား သှား”ကသှေယျမိုး တဈယောကျ လှယျအိတျလှယျ၍ ကိုကိုမောငျ့ထံ ထှကျလာခဲ့သညျ။ သူ့ကိုယျပျေါတှငျ ကပျပါလြှကျရှိသော အဖုအထဈ အမို့အမောကျ အစှငျ့အကား အသားအုံအသားဆိုငျတို့၏ တနျဖိုးကွီးမားလှပုံကို လကျတှသေိ့လိုကျ၍ အလှမာနျဝငျ့ကာ ကြော့ကြော့မော့ မော့နှငျ့ ဘဝငျမွငျ့လြှကျရှိပါတော့သညျ။ နာရီကွညျ့လိုကျတော့ (၁၁)နာရီခှဲပွီ။“ ဟောတော့…(၁၀)နာရီ ခြိနျး ထားတာ ဒုက်ခပါဘဲ”ကသှေယျမိုး တဈယောကျ ခပျသှကျသှကျသုတျခွတေငျလိုကျပါတော့သညျ။ ကိုကိုမောငျ ကြူရှငျကပွနျလာ တော့ (၉)နာရီ (၄၅)မိနဈ ရှိပွီ။ ဖွဈနိုငျလြှငျ ကသှေယျမိုးကို ရညျးစားစကားပွောမညျ။ အခှငျ့သာလြှငျ ဖွုတျမညျ။ ကသှေယျမိုး၏ အပွောအဆို အကွညျ့အရှုအမူအယာတှကေ သူဘာလုပျလုပျ သဘောတူကွညျဖွူမညျ့ လက်ခဏာတှေ ပွသ လြှကျရှိ၏။
လကျနှေးလို့မဖွဈ။ အိမျရှရေ့ောကျတော့ ဝငျးတံခါးမှာ သော့ခတျထားသညျ။ သူ့မိထှေးဝမျးကှဲ မရှိကွောငျး သခြော၏။ ဦးလေး ဖွဈ သူက အလုပျရုံမှာသာနသေညျမို့ ဒီအခြိနျအိမျမှာနလေမေ့ရှိ။ ကိုကိုမောငျ တဈယောကျ သူ့စိတျကူး အကောငျအထညျဖျောနိုငျတော့ မညျမို့ အူမွူးနသေညျ။ ကသှေယျမိုး၏ တငျးတငျးမို့မို့ နို့အုံနှဈမှာနှငျ့ ပွညျ့တငျးစှငျ့ကားသော တငျဆုံထှားထှားတဈတဈကွီးကို မွငျ ယောငျ မိကာ သူ့ပေါငျကွားက ဒုတျတနျကွီးမှာ မတျကနဲ တောငျထလာသညျ။ ဘဝပေးကုသိုလျအရ ယောကျြားပီသစှာ ခြောမောရုံ မြှမက စံခြိနျမှီ သော ဒုတျကွီးကိုပါ ပိုငျဆိုငျထားသညျ။ သူ့ ဒုတျတနျကွီးမှာ အရှညျ (၇)လကျမခှဲ လုံးပတျ (၄)လကျမခှဲမို့ အားရ ကနြေပျစရာကောငျးလှသညျ။ ကသှေယျမိုး ခံနိုငျလိမျ့မညျ မဟုတျ။ သို့သျော ရှာဖှမှေတျသားထားသော ကာမဗဟုသုတတို့ဖွငျ့ ခြော့ မော့နှူးနှပျ၍ ဖွုတျရမညျသာ။ တှေးရငျး တှေးရငျး လီးကွီးက ကွှ သထကျကွှ မတျသထကျမတျတောငျလာ၏။ ကိုကိုမောငျ သူကိုငျ သော သော့ဖွငျ့ တံခါးဖှငျ့ဝငျလိုကျသညျ။ပွီးတော့ ပွနျပိတျ၏။ ကသှေယျမိုး လာလြှငျ ဘဲလျတီးနကေဖြွဈသညျ။ အပျေါထပျ တကျ၍ ကွာကွာလိုးနိုငျအောငျ ညဈေးက အသငျ့ဝယျထားသော လီးကွီး ဆေးကို လိမျးလိုကျသညျ။ သောကျဆေး ကိုတော့ ကေ သှယျမိုးလာမှ သောကျမညျ။ ပထမဆုံး စတငျဖိုကျရမညျ့ပှဲမို့ ယောကျြားအစှမျး သတ်တိပွနိုငျမှဖွဈမညျ။
ကွာကွာစိမျလိုးနိုငျလေ မိနျးမစှဲလဟေူသော စကားကို ကိုကိုမောငျ သိထား၏။ နဂိုကပငျ တောငျမတျနပွေီဖွဈသော လီးတနျကွီး မှာ ဆေးလိမျးလိုကျသောအခါ သံမဏိခြောငျးကွီးကဲ့သို့ မာကြောလာသညျ။ ဒဈဆံ ပွဲကွီးကလညျး ဝငျးပွောငျတငျးကားနေ၏။ “ ကရငျ ကရငျ ကရငျ”ကိုကိုမောငျ ပုဆိုးကို ကပြာကယာဝတျ၍ အပျေါထပျမှဆငျးလာ၏။ တံခါးဝသို့ရောကျသောအခါ ကသှေယျ မိုး မဟုတျဘဲ မိထှေးဝမျး ကှဲ မဝဝေခေိုငျ ဖွဈနေ၏။ တံခါးဖှငျ့၍ သော့ဖွုတျရုံမြှသာရှိသေး မဝဝေခေိုငျက တံခါးကိုဆှဲဟကာ အလောတကော ဝငျလိုကျသညျ။ သညျတော့ ရပျလြှကျရှိသော ကိုကိုမောငျ့ ကိုယျလုံးနှငျ့ မဝဝေခေိုငျ ကိုယျလုံးမှာ ထိထိမိမိကွီး ပှတျတိုကျသှား၏။ မဝဝေခေိုငျ၏ ကွီးမား စှငျ့ကားသော ဖငျဆုံသားကွီးက ကိုကိုမောငျ၏ ပေါငျရငျးကို အိကနဲ ဖိမိသှား၏။ ထို့အတူ ဆူဖွိုးတငျးအိသော နို့ကွီးနှဈမှာကလညျး ကိုကို မောငျ၏ နံစောငျးကို နှေးထှေးအိစကျစှာ ဖိကပျသှားသညျ။
မဝဝေခေိုငျ အတျောကွာသညျအထိ ဖိကပျထား၏။ ပွီးမှ အိမျထဲသို့ ခပျသှကျ သှကျ ဝငျသှားသညျ။ စောစောကပငျ ကိုယျ့အတှေး နှငျ့ကိုယျ စိတျတှထေနသေဖွငျ့ ကိုကိုမောငျ တကိုယျလုံးရှိနျးဖိနျးတုနျလှုပျသှား၏။ လိမျးဆေးကလညျး တရိပျရိပျသတ်တိပွလြှကျ၏။ ကိုကိုမောငျ တဈယောကျ ကသှေယျမိုးကိုမသှေ့ား၏။ ထို့ကွောငျ့ ဘာကိုမှသတိမရတော့ဘဲ မဝဝေခေိုငျ နောကျသို့လိုကျခဲ့သညျ။ တံခါးကိုလညျး သညျအတိုငျးဖှငျ့ထားခဲ့မိသညျ။ ခွံဝငျးနှငျ့ အိမျမကွီးက ပေ (၄၀)လောကျ ကှာသညျ။ ကိုကိုမောငျ အိမျတှငျးရောကျ သှား တော့ မဝဝေခေိုငျက ဖိနပျကိုကုနျးကောကျရငျး အခနျးထဲဝငျသှားသညျ။ ကုနျးလိုကျသညျ့အခိုကျတှငျ ဖငျဆုံထှားထှားကွီးက အစှမျးကုနျ စှငျ့ကားသှားသညျ။ ထိုမွငျကှငျးကွောငျ့ ကိုကိုမောငျ့ ပေါငျကွားက လီးတနျကွီးမှာ တငျးကနဲ တငျးကနဲဖွဈသှားသညျ။ နိမျ့ခြီ မွငျ့ခြီဖွငျ့ စညျးခကျြကကြ လှုပျခါသှားသော ဖငျဆုံကွီးက ကိုကိုမောငျ့ မကျြစိထဲစှဲသှားသညျ။ ကိုကိုမောငျ တဈယောကျ သူ့ ဦးလေးနှငျ့ မဝဝေခေိုငျ တို့ လိုးကွတာကို ခြောငျးခြောငျးကွညျ့ဖူး၏။ မဝဝေခေိုငျက အပေးကောငျးသညျ။ ရခါစကတော့ ဦးလေးက လညျး အတျောလိုးနိုငျသညျ။
မဝဝေခေိုငျ၏ အပေးကောငျးခွငျး၊ အပွုစုကောငျးခွငျးတို့ကွောငျ့ ဦးလေးဖွဈသူ သောကမှာ ပါးလြှစပွုလာသညျ။ အရကျကို လညျး အတိုငျးအဆနှငျ့သောကျတော့၏။ မနှငျးရီလောကျ မခဈြသညျ့တိုငျ သူ့အတိုငျးအတာနှငျ့သူ မဝဝေခေိုငျအပျေါမှာ သာယာ တပျမကျလာ သညျ။ တဈနေ့ ဦးလေးအစောကွီး အိမျပွနျလာသညျ။ ခါတိုငျး သညျအခြိနျပွနျလာလမေ့ရှိ။ မကျြနှာကွောလညျး တငျးနသေညျ။ အပျေါ ထပျ အခနျးထဲစာကကျြနသေော ကိုကိုမောငျ့ထံ ရောကျလာသညျ။“ ကိုကိုမောငျ…မဝေ မရောကျသေးဘူး လား”“ ဟုတျကဲ့ ဦးလေး“ တောကျ…ဒီဖာသယျမတော့…သိကွသေးတာပေါ့ကှာ…” ည (၉)နာရီထိုးတော့ မဝဝေခေိုငျ ပွနျ ရောကျလာသညျ။ ဦးလေးက အခနျးထဲကစောငျ့ရငျး အရကျသောကျနသေညျ။ အခွအေနေ ထူးခွားတော့မညျကိုသိ၍ ကိုကိုမောငျ ကလညျး အပျေါထပျမှ ခြောငျးကွညျ့နသေညျ။ ဦးလေးကိုတှတေ့ော့ မဝဝေခေိုငျ အံ့သွသှား၏။ သို့ သျော ဟနျလုပျ၍“ ဟငျ…အကို ကွီးက အစောကွီးရောကျနတေယျ…”ဦးလေးက ဘာစကားမှမပွောဘဲ အရကျသောကျရငျး ခပျတညျတညျကွညျ့နသေညျ။ မဝေ ဝခေိုငျက ဦးလေးရှမှေ့ာပငျ အဝတျအစား လဲသညျ။ အတှငျးခံ ဘောငျးဘီနှငျ့ ဘရာစီယာသာကနျြရှိနစေဉျ ဦးလေးထံသို့လာပွီး ဘေးကပူးကပျထိုငျလိုကျသညျ။
“ ဒီနေ့…ဆာပွီနဲ့တူတယျ…ဟုတျလား…”ပွောပွောဆိုဆို ပုဆိုးကိုလှနျ၍ ဦးလေး လီးတနျကွီးကို ပှတျသပျဆုတျဆှပေးသညျ။ ဦးလေးက မလှုပျ။ အရကျကိုသာ ဆကျသောကျ နေ၏။ ဦးလေး၏ မတုနျမလှုပျအမူအယာကွောငျ့“ ဘယျလိုဖွဈနတောလဲကှာ… ခပျတညျတညျကွီး…ကွညျ့ပါလား ငေါငျတောငျတောငျနဲ့ လှုပျလညျး မလှုပျဘူး…”မဝဝေခေိုငျက ငေါငျစငျးစငျးဖွဈနသေော လီးတနျ ကွီးကို လကျဖဝါးပျေါတငျ၍ (၂)ခကျြ (၃)ခကျြ ဆုတျရငျးပွောသညျ။ “ မငျး…နလေ့ညျက ဘယျသှားသေးလဲ…”“ မွို့သဈက ညီမ ဆီပါ…” “ တဈယောကျထဲလား…”“ တဈယောကျထဲပေါ့ အကိုကွီးကလဲ” “ မငျး သှားတဲ့အိမျနဲ့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျအိမျမှာ နလေ့ညျက ငါ ပစ်စညျးသှားပို့တယျ…မငျးကို ကောငျတဈကောငျရဲ့ ဆိုငျကယျနောကျမှာ တှလေို့ကျတယျ အဲဒါ အကိုပါလို့တော့ မပွောနဲ့…ခါးဖကျ ပွီး လိုကျသှားတာ အသအေခြာမွငျလိုကျတယျ မငျး…ငါနဲ့ မပေါငျးခငျြရငျ အခု ဆငျးသှားလို့ရတယျနျော” “ အဟငျး…ဟငျး အကိုပါ လို့ မပွောနဲ့ဆိုပမေယျ့ ပွောရမှာပဲ အကိုကွီးရအေဲဒါ အကိုဝမျးကှဲအစဈပါ”မဝဝေခေိုငျက ဆကျတီခုံပျေါက ဆငျးလိုကျပွီး ဒူးတုတျ ထိုငျလြှကျ ဦးလေးလီးကွီးကို ပါးစပျဖွငျ့ မှုတျပေးနသေညျ။ဦးလေးကမူ ဘာမှ မပွောတော့ဘဲ သူလုပျသမြှ အသာငွိမျခံနသေညျ။
အတျောကွာတော့ လီးကွီးက မတောငျခငျြ့ တောငျခငျြ တောငျလာသညျ။ မဝဝေခေိုငျ ဘောငျးဘီနှငျ့ ဘရာစီယာကို ခြှတျပဈလိုကျ ပွီး ဦးလေးလကျကို သူ့နို့အုံကွီးပျေါတငျပေးလိုကျသညျ။ ဦးလေးက နို့ကွီးနှဈလုံးကို တလှညျ့ စီ ဆုတျခပြေေးနေ၏။ မဝဝေခေိုငျက ဒဈကွီးကို ပွဲသထကျပွဲအောငျဖွဲပွီး ပါးစပျဖွငျ့ တစေု့ပျပေးသညျ။ ဦးလေး ပုံစံကွညျ့ရသညျမှာ သိထားသလောကျမပွောတော့ဘဲ အခြောငျရသော မိနျးမတဈယောကျကို အခြောငျလုပျရသလိုမြိုး ပျေါ လှငျနသေညျ။ ကိုကိုမောငျ တဈယောကျ ဦးလေးနှငျ့ နရော ခငျြးလဲလိုကျခငျြသညျ။ ကွညျ့ရငျး ကွညျ့ရငျး မနနေိုငျတော့၍ ဂှငျးတိုကျလိုကျ ၏။ လရတှေကေ ဗငျြးကနဲ ပနျးထှကျကုနျသညျ။ နှဈ နှဈကာကာ မခဈြသညျ့တိုငျ သှေးသားဆန်ဒအရ ထကွှလာပုံရ၏။ မဝဝေခေိုငျကို ခုတငျပျေါ ကနျ့လနျ့ဖွတျ ပကျလကျအိပျခိုငျးပွီး ပေါငျနှဈခြောငျးကို ပငျ့ထောငျဖွဲကားပွီး မတျတပျရပျ၍ ဆောငျ့ပါတော့သညျ။ (၃)မိနဈ လောကျအရောကျတှငျ ပွီးသှားပုံရ၏။ ဦးလေး သူ့လီးတနျကွီးကို ဆှဲခြှတျလိုကျသညျ။ စောကျဖုတျထဲက ထှကျလာသညျနှငျ့ လီးတနျကွီး က ပြော့ခှငေိုကျဆငျးနတေော့၏။
အရကျတဈခှကျသောကျပွီး ခုတငျပျေါတကျအိပျတော့သညျ။ မကွာခငျ ဦးလေး အိပျပြျောသှားတော့၏။ သညျတော့မှ စောစောက ဆကျတီခုံပျေါပွနျထိုငျပွီး သူ့နို့ကွီးနှဈလုံးကို သူ့ဖာသာ ဆုတျခနြေေ၏။ (၁၅)မိနဈလောကျကွာသောအခါ ခုတငျခွရေငျးရှိ ဘီရိုဆီ သို့သှား ပွီး ဘီရိုအောကျလကျနှိုကျသညျ။ လကျထဲတှငျ အဝတျနှငျ့ပတျထားသော ပစ်စညျးတဈခုပါလာသညျ။ ခုံပျေါပွနျထိုငျပွီး အဝတျကိုဖွလေိုကျ သညျ။ ရာဘာလီးတုကွီးဖွဈနေ၏။ ကိုကိုမောငျ အံ့သွသှားသညျ။ မဝဝေခေိုငျက ပေါငျနှဈခြောငျးကိုဖွဲကာ လီး တုကွီးကို သူ့စောကျဖုတျ ထဲ ထိုးသှငျးလိုကျပွီး အခကျြပေါငျးမြားစှာ အသှငျးအထုတျပွုလုပျပါတော့သညျ။ (၂၅)မိနဈခနျ့ အရောကျ တှငျ ခွထေောကျနှဈခြောငျး ဆနျ့တနျးလြှကျ တဆတျဆတျတုနျလှုပျကာ ငွိမျသကျသှားတော့သညျ။ ထိုနကေ့ပငျ ကိုကိုမောငျ့ စိတျ ထဲ မဝဝေခေိုငျကို လိုးခှငျ့ရှိကွောငျး လိုးလို့ရကွောငျး သဘောပေါကျသှားခဲ့၏။ သို့သျော ကသှေယျမိုး မကျြနှာကို မွငျယောငျမိ၍ မ လိုးဖွဈခဲ့ပါ။ သူ ကသှေယျမိုးကို တကယျ ခဈြသညျ။ နှဈနှဈကာကာခဈြပါသညျ။ယနေ့….ငဲ့ကှကျမှုတံတိုငျးကွီး ပွိုကသြှားခဲ့ပွီ။
ဒီကိစ်စ ဖွဈတော့မညျဆိုတာ ကိုကိုမောငျ ရိပျမိခဲ့သညျ။ သူ့ရဲ့ ကွီးမားစှငျ့ကားလှတဲ့ ဖငျဆုံသားအိအိကွီးဖွငျ့ သူ့ပေါငျကို တမငျဖိပှတျ သှားသညျ။ ပွီးတော့ ဆူဖွိုးတငျးအိလှသော နို့ကွီးနှဈလုံးကလညျး သူ့နံစောငျးကို ပှတျတိုကျသှားသညျ။ စောစောကပငျ ကေ သှယျမိုးကို အပွတျလိုးရနျ လီးကွီးဆေးတှလေိမျးထားပွီး ကွာကွာလိုးနိုငျသညျ့ဆေးကိုပါ သောကျထားသညျ။ သနျးခေါငျထကျ ည ဥျ့မနကျတော့ပါ။ ဤမြှအထာတှေ ပွနပေါလကျြနဲ့မှ ကိုကိုမောငျ ငွိမျသကျနလြှေငျ ယောကျြားမဟုတျတော့ဘဲ နှားသတ်တဝါ ဖွဈရပေ တော့မညျ။ ကဲ သဖေို့ သာပွငျပတေော့ မဝဝေခေိုငျရေ။ စိတျထဲကကွိမျးဝါးလြှကျ မဝဝေခေိုငျ အခနျးထဲစှတျဝငျလိုကျသညျ။ မဝေ ဝခေိုငျက ကိုယျပျေါက အဝတျ အစားတှကေို တဈခုမကနျြခြှတျပွီး အဝတျအစားလဲရနျ ပွငျဆငျနသေညျ။ အခနျးထဲစှတျဝငျလာ သော ကိုကိုမောငျ့ကို မွငျတော့ ထမီတဈ ထညျကို ကပြာကယာစှတျပွီး ခွုံထားလိုကျ၏။ ကိုကိုမောငျက အခနျးတံခါးကို ဂကျြထိုး ပိတျလိုကျသညျ။ မဝဝေခေိုငျက သူလုပျသမြှကို ဘာစကားမှမပွောဘဲ ကနြေပျသောအကွညျ့နှငျ့ ကွညျ့နသေညျ။
မဝဝေခေိုငျ ကွညျ့နခေိုကျမှာပငျ ပုဆိုးနှငျ့အကငြ်္ီကို ခြှတျပွီး ကုလားထိုငျပျေါပဈတငျလိုကျသညျ။ ရငျအုပျသားတှကေ ယောကျြား ပီသ စှာ ဖုထဈနပွေီး ကဈြလဈသနျစှမျးသော ကိုယျလုံးက မဝဝေခေိုငျကို ဖမျးစားထားသညျ။ ထို့ထကျ သညျးထိတျရငျဖိုစရာ မွငျကှငျးက ကိုကို မောငျ့ ပေါငျကွားရှိ တဆတျဆတျတောငျမတျနသေော လီးတနျတုတျတုတျကွီးပငျ ဖွဈသညျ။ လီးတနျကွီး ပတျပတျလညျတှငျ သှေးကွော ကွီးတှကေ အပွိုငျးပွိုငျးထကာ ဖုဖေါငျးနသေညျ။ မဝဝေခေိုငျ တဏှာရာဂအားကွီးကွောငျး ကိုကို မောငျ သိထားပွီးဖွဈသညျ။ ဦးလေးနှငျ့ လိုးတာအားမရတိုငျး လီးတုနှငျ့ စခနျးသှားရတာကိုလညျး သိပွီးဖွဈသညျ။ သံမဏိခြောငျး ကွီးကဲ့သို့ မာကြောသနျစှမျးလှသော လီးတနျတုတျတုတျကွီးကို တပျမကျစှာကွညျ့နသေော မဝဝေခေိုငျ၏ ကာမရာဂ စိတျမြား တစ တစပွငျးထနျလာသညျ။ စောကျဖုတျကွီးက တဖွညျးဖွညျး တငျးမာဖေါငျးကားလာသညျ။ စောကျခေါငျးဝတလြှောကျမှာ လညျး တ ရှရှနှငျ့ဖွဈလာသညျ။ သူမရငျထဲ ဖွိုးကနဲ ဖငျြးကနဲဖွဈသှားပွီး စောကျဖုတျထဲက စဈကနဲ ယားယားတကျလာသညျ။ ကိုကိုမောငျ့ လီးတနျကွီးကို အားပါးတရ ဆုပျကိုငျလိုကျ၏။“ ကဲ…ကွာပါတယျ မောငျလေးရယျ…မမ မနနေိုငျတော့ဘူး…မငျးလီးကွီးကို တအား ခံခငျြလာပွီ…လိုးပေးတော့နျော…”မဝဝေခေိုငျ တဈယောကျ မှတျသိပျတောငျ့တစှာ ပွောရငျး ခုတငျဘောငျပျေါလကျထောကျကာ ဖငျကုနျးပေးတော့သညျ။
ပွူးဝငျး အကျကားနသေော ဖငျဆုံထှားထှားအိအိကွီးနှဈမှာက ကိုကိုမောငျ့ကို တဒင်ျဂအသကျရှူရပျသှားစသေညျ။ ဖငျအိုးကွီးနှဈမှာ ကွားမှ နောကျ သို့ကနျထှကျနသေော စောကျဖုတျနှုတျခမျးသားထူထူကွီးတှကေ အညိုရောငျသမျးနပွေီး အတှငျးပိုငျးမှာမူ နီရဲ နေ၏။ ကိုကိုမောငျ စောကျ ဖုတျကွီးကို လကျဝါးနှငျ့ ပငျ့၍သုံးလေးခကျြ ပှတျပေးလိုကျရာ မဝဝေခေိုငျဖငျဆုံကွီးက အထကျသို့ မွောကျတကျလာသညျ။သူ့လကျဖဝါး မှာ စောကျရတှေစေိုရှဲသှားသညျ။ ထို့နောကျ ဒဈပွဲကွီးကို စောကျဖုတျအဝသို့တထေ့ားလိုကျ ပွီး ခါးနှဈဖကျကို အကအြနဆုတျကာ ဖိသှငျးလိုကျသညျ။ ပူနှေးရှိနျးမွသော အတှကေ့ တကိုယျလုံးကို ဆိမျ့တကျသှားစသေညျ။“ ဇှိ…ဇှဈ…ဗွဈ…ဗွဈ…ဗရဈ…ဗွဈ…ဖှတျ လီးတနျကွီးက စောကျခေါငျးအတှငျးသို့ တထဈခွငျးနဈဝငျသှားသညျ။ မဝဝေခေိုငျ ဖငျအိုး ကွီးနှဈမှာက ကွှတကျခါရမျးသှား၏။ အားရ ကနြေပျသော စိတျတှကေ သူမ တကိုယျလုံးလှမျးဖုံးသှားတော့သညျ။ ကိုကိုမောငျက ခါးကိုမတျမတျထားပွီး ပူနှေးနူးညံ့သော စောကျဖုတျ ကွီးထဲကို လီးတနျကွီးမွှုပျသှငျး၍ ခတ်ေတစိမျထားလိုကျသညျ။ နူးညံ့ သလောကျ ညှဈအားစုပျအား ကောငျးလှသော စောကျဖုတျအတှကေ့ ကိုကိုမောငျ့ ရာဂမီးကို အလြှံကွီးစှာ တောကျလောငျစေ၏။
တဏှာရာဂအားကွီးလှသော မဝဝေခေိုငျ တဈယောကျ သူ့စောကျဖုတျကွီးထဲ သို့ တငျးတငျးကွပျကွပျကွီး နဈဝငျနသေော လီး အရသာကို မိနျးမူးကနြေပျစှာ ခံစားနစေဉျ ဖငျဆုံကွီးကို ပှတျပေးနသေဖွငျ့ အူထဲအသဲထဲ ယားယားတကျလာသညျ။ ဖငျဆုံကတ ဆငျ့ ကြောပွငျနုနုဆီသို့ ရောကျသှား၏။ ကြောပွငျမှတဆငျ့ အောကျသို့လြှိုဝငျကာ နုရှတငျးအိနေ သော နို့အုံမို့မို့ကွီးကို ဆုတျခြေ ပှတျဆှပေးသညျ။ အားရကနြေပျသညျအထိ ဆုတျခပြှေတျဆှပွီးမှ အုံအရငျးကို ခပျတငျးတငျးဆုပျကိုငျပွီး ဖငျကြောကွီးကို ရှုံ့ ခှကျ၍ လီးကွီးကို ပွနျနှုတျ သညျ။ နို့အုံကွီးကို ခပျဖှဖှလေးခပြေေးရငျး ခပျကွမျးကွမျးပွနျဖိသှငျးသညျ။“ အငျ့…အမေ့ အား အား အီးအငျး ရှီး .ကြှတျကြှတျ”လီးကွီးကို အရှိနျနှငျ့ဆောငျ့သှငျးလိုကျသဖွငျ့ မဝဝေခေိုငျ တကိုယျလုံး ဆတျကနဲကော့တကျသှားပွီး စောကျဖုတျအုံကွီးတဈခုလုံး ပူ ရှိနျးကငျြတကျသှားသညျ။
ဆောငျ့ခကျြတှကေ ပွငျးထနျသလောကျ အလှနျထိမိကောငျးမှနျသညျ။ ကွာလကေောငျးလေ ကောငျးလဆေိမျ့လမေို့ မဝဝေခေိုငျ၏ ရာဂမီးမှာ အားကွီးသထကျ အားကွီးလာတော့သညျ။ ကိုကိုမောငျ၏ ပွငျးထနျသောဆောငျ့ခကျြနှငျ့အညီ သူမ၏ ဖငျဆုံကွီး ကို ကော့၍တ မြိုး မွှောကျ၍တဖုံ ဝိုကျ၍တနညျး အခံကွီးခံပေးနသေညျ။ ကိုကိုမောငျက ဆုတျကိုငျထားသော နို့ကွီးနှဈလုံးကို လှတျထားလိုကျပွီး ခါးစပျကိုမွဲမွဲတငျးတငျးဆုတျကိုငျလြှကျ ဒူးကိုအနညျးငယျ ညှတျပွီး ပငျ့ပငျ့ထိုးပွနျ၏။ ထိုသို့ ဒူးညှတျပွီး ပငျ့ ဆောငျ့လိုးလိုကျသောအခါ ပွူးတငျးမတျတောငျနသေော စောကျစိငုတျ ညိုညိုကွီးကို အရှိနျနှငျ့ ဒလစပျ ပှတျထိုးနသေလိုဖွဈ သညျ့အတှကျ မဝဝေခေိုငျ တဈယောကျ အကောငျးလှနျကာ ဖငျသားတှေ တဆတျဆတျတုနျခါနေ ၏။
လထေဲတှငျ မွောကျသှားသလို ခံစားလိုကျရပွီး ထောပတျမွဈထဲအစိမျခံလိုကျရသညျ့နှယျ အီဆိမျ့သှားသညျ။“ .ကောငျး….ကောငျး လိုကျတာကှာ….အမလေးအရမျးထိတာပဲ…..အငျ့…..အ” ဆောငျ့ခကျြတှကေ မီးပှငျ့ထှကျမလား အောကျမရေ့အောငျ သနျလှနျးမွနျ လှနျးလှသညျ။ မဝဝေခေိုငျကလညျး အားကမြခံ ကော့၍ ကော့၍ ခံသညျ။ တခေါငျးလုံးရမျးခါလြှကျ တဆတျဆတျတုနျကာ ငါးရံ့ ပွာလူးဖွဈနပေါတော့သညျ။ တငျပါးခှကျကွောကွီးတှေ ရှုံ့ခှကျ၍ နောကျသို့ပဈပဈခံနသေညျမှာ ကွောကျဖှယျလိလိ ကွကျသီးထ စရာကွီးဖွဈသညျ။ မဝဝေခေိုငျလို မိနျးမမြိုးက တဏှာရာဂအားကွီး၏။ရမ်မကျသှေးသားသောငျးကွမျးသညျ။ ထို့ကွောငျ့ သာမနျလီး ကို ဖွုံလမေ့ရှိ။ အခု ကိုကိုမောငျ့ လီးကွီးမှာ စံခြိနျမှီရုံမြှမက လှနျ၍ပငျနတေော့ သညျ။ အလိုးအဆောငျ့အညှောငျ့တှကေလညျး သနျမွနျရုံမြှမက ကွမျးလညျးကွမျး၏။ မဝဝေခေိုငျ အလှနျတောငျ့တခဲ့ရသော လီးမြိုးကို အခုမှပငျ ခံရတော့၏။ ကိုကိုမောငျက အောကျမှပငျ့ထိုးပွီးလိုးနရောမှ ပုံစံကိုပွောငျးလိုကျ၏။ လီးတနျကွီးကို ဒဈအရငျးထိရောကျအောငျထုတျ၏။ ပွီးမှ ခပျ ပွငျးပွငျး ဆောငျ့ဆောငျ့လိုးသညျ။မဝဝေခေိုငျ သံကုနျညှဈ၍ အျောဟဈမိပါတော့၏။ အရှကျအကွောကျဆိုတာလညျး လုံးဝမရှိတော့။ ပငျကိုယျအစှမျး ဆေးအစှမျး ကွောငျ့ ကိုကိုမောငျ့ ဆောငျ့ခကျြတှကေလညျး အံ့မခနျးပငျ။
ကသှေယျမိုး တဈယောကျ စိတျကူးမြိုးစုံတို့ဖွငျ့ ကှနျ့မွူးလြှကျ ကိုကိုမောငျတို့ခွံထဲ ရောကျလာသညျ။ နာရီကွညျ့မိတော့ (၁၀)နာရီ (၃၀)မိနဈရှိနပွေီ။ ခြိနျးထားတာက (၁၀)နာရီ အခု မိနဈ(၃၀) ပငျလှနျနပွေီဖွဈ၍ ကိုကိုမောငျ ဒေါဖောငျးနလေောကျရော့မညျ။ ခြော့ နညျး တှကေိုလညျး စဉျးစားလိုကျ၏။ ကသှေယျမိုးက ကိုကိုမောငျ စောငျ့နလေောကျပွီအထငျနှငျ့ အိမျထဲမဝငျတော့ဘဲ သူတို့နှဈ ယောကျ စာ ကကျြနကေဖြွဈသညျ့ ပနျးစက်ကူရုံကွီးရှိရာသို့ တနျးသှားသညျ။စက်ကူပနျးပငျအောကျရောကျတော့ ကိုကိုမောငျ မရှိ စားပှဲပျေါတှငျ ဘာစာအုပျမှမရှိ။ ပနျးခွောကျတှကေ စားပှဲနှငျ့ ကုလားထိုငျပျေါ တှငျ ကရြောကျနသေညျဖွဈ၍ ကိုကိုမောငျ လုံးဝမ လာသေးသညျမှာ သခြောသှားသညျ။ စိတျထဲထူးဆနျးသလို အောကျမမေိ့သညျ။ လှယျ အိတျကို စားပှဲပျေါပဈခလြိုကျပွီး အိမျကွီး ဆီသို့ပွနျသှားသညျ။ အဆငျသငျ့ပှငျ့နသေော နောကျဖေးပေါကျမှ ဝငျခဲ့၏။ ကိုကိုမောငျက အ ပျေါထပျမှာနသေဖွငျ့ လှကေားပျေါ တကျမညျအပွု လှကေားနှငျ့ကပျလကျြရှိသော မဝဝေခေိုငျ အခနျးထဲက ညီးညူလှုပျရှားသံတှေ ကွား လိုကျရသညျ။ အပျေါထပျ တကျမညျ့ ခွလှေမျးတှကေ တုနျ့ကနဲရပျဆိုငျးသှားပွီး အခနျးနားသို့ တိုးကပျလိုကျသညျ။
အခနျးကို (၃)ထပျသား အကောငျးစားဖွငျ့ကာရံထားသညျ့အတှကျ အပေါကျမရှိအောငျ လုံခွုံသညျ့တိုငျ အုတျနံရံကဲ့သို့ ထူထူထဲထဲ မရှိရုံမြှမက လဝေငျလထှေကျ ကောငျးအောငျ အပျေါပိုငျးတှငျ သံဇကာတှတေပျဆငျထားသညျ့အတှကျ အခနျးတှငျးက အသံတှေ မှာ အတိုငျးသားကွားနရေ၏။ စောစောက ဝငျလာကာစ ဗွုနျးကနဲမို့ မကွားမိသျောလညျး အသအေခြာနားထောငျလိုကျသောအခါ“ .အား အ.ကောငျး.ကောငျးလိုကျတာကှာ….အမလေး….ထိ….ထိလိုကျတာ ဇှတျ.ဗွိ အငျ့ အငျ့ အ….ဆောငျ့….အ မေ့….နာ…နာဆောငျ့….အ…..မမပွီး…ပွီး..တော့မယျ.ဗွဈ….ဗွိ….ဗွဈ….ဒုတျ….ဗွဈ….ဒုတျ…..ဗွဈ….ဗွဈ….အမလေးး အား ဟား ကြှတျ….ဟုတျ….ဟုတျပွီ…..အငျ့…အငျ့….အ….” တျောတျောလေး ပကျပကျစကျစကျလိုးနပေုံရသညျ။ စောကျဖုတျသံ၊ လီးသံ၊ ငွီး သံတှကေ တခနျးလုံးဆူညံပှကျလောရိုကျနေ၏။ မောငျလေးဆိုသူမှာ ဘယျသူဘယျဝါမှနျးမသိ။ ကိုကိုမောငျ့ မိထှေးဝမျးကှဲ မဝဝေေ ခိုငျက ပှမေညျ့ပှမျမညျ့ပုံစံကွီးမို့ သူ့ဦးလေးမရှိခိုကျ တ ခွား ကောငျတဈကောငျနှငျ့ ခြိနျးတှယျနပေုံရသညျ။
“ နာနာဆောငျ့…..ဟုတျပွီ…..ဟုတျပွီ…..အမလေး….ကောငျး….ကောငျးလိုကျတာ…”“ ဖှတျ….ဖှပျ….ဖှတျ….ပလှတျ….ဗွဈ….ဗွ ဈ….ဒုတျ….ဗွဈ….ဒုတျ….ပွဈ…..ဗွဈ”“ မမ…ကောငျးလားဟငျ”“ အငျး….အမလေး…..ကောငျး….ကောငျး တယျ….နာ….နာ….အငျ.” ကသှေယျမိုး တဈယောကျ ကိုကိုမောငျ့ အသံကိုကွားလိုကျရသောအခါ တကိုယျလုံး မိုးကွိုးအပွဈခံ လိုကျရသလို တုနျလှုပျခြောကျ ခွားသှား၏။ နှလုံးသားနုနုကို သောကအပူလုံးကွီးက ဒုနျးကနဲဝငျဆောငျ့သညျ။ ပွာဝမေူးမိုကျ သှား၏။ အခနျးနံရံကိုမှီ၍ မကျြလုံးကို မှိတျ ထားသညျ။ နာကွညျးခံပွငျးစိတျတှကေ တရိပျရိပျတကျလာသညျ။ မာနတရားက ဦးနှောကျထဲရောကျလာ၏။ ကသှေယျမိုး အံကိုတငျး တငျးကွိတျရငျး ခြာကနဲလှညျ့ထှကျခဲ့သညျ။ ပေါငျကွားရှိ စောကျဖုတျထဲမှ စောကျရပေူတခြို့ ပွဈကနဲထှကျသှားခဲ့ပွီ။ ထှနျးထှနျး တဈယောကျ အိမျအပွငျဖကျရှိ ပကျလကျကုလားထိုငျပျေါတှငျ အပွာစာအုပျ တဈအုပျကို အပြိုစငျမဂ်ဂဇငျးထဲညှပျ၍ ဇိမျနှငျ့ ဖတျနစေဉျ သူ့ကိုဖွတျကြျောသှားသော ကသှေယျမိုးကို အနီးရောကျမှ မွငျလိုကျ၏။ စောစောကလှယျအိတျနှငျ့ ထှကျသှားပွီး အခုလှယျ အိတျ ပွနျမပါ။
ပွီးတော့ မကျြနှာကလညျး နီမွနျးထူအနျးနပွေီး ငိုထားပုံရသညျ။ ကသှေယျမိုးက ငုတျတုတျကွီးတှနေ့ရေသော သူ့ကို တောငျ နှုတျဆကျမနတေော့ဘဲ အိမျထဲတနျးဝငျသှားသညျ။ ပုံစံက ရညျးစားပူမိလာသောပုံမြိုး ထှနျးထှနျး ပွုံးလိုကျသညျ။ အပွာစာအုပျကို တောငျ သိမျးဆညျးဖို့ရာ သတိမထားမိတော့ဘဲ သညျအတိုငျးညှပျခဲ့ပွီး ကသှေယျမိုးနောကျ ထလိုကျခဲ့သညျ။ သူ့အခနျး ပေါကျရောကျတော့ ခယျမခြောက ခေါငျးအုံးကို မကျြနှာအပျ၍ မှောကျရကျကွီး အိပျနေ၏။ ထမီက ဒူးခေါငျးအထကျနားထိ ရောကျ နေ၏။ ပေါငျတံတုတျတုတျနှဈခြောငျးက ဘေးသုိ့ခပျကားကားအနအေထားဖွဈ သညျ။ ဖွူဖှေးဝငျးမှတျသော ခွသေလုံးသား ပွညျ့ ပွညျ့လေးက စှဲမကျစရာကောငျးလှသညျ။ ဆူဖွိုးထှားတဈသောဖငျဆုံကွီးက သိသိသာသာ ခုံးမောကျနသေညျ။ မကျြနှာက တဖကျသို့ စောငျးထားသညျ။ တခကျြ တခကျြ သိမျ့ကနဲ သိမျ့ကနဲတုနျခါသှားသညျ့အတှကျ ငိုရှိုကျနကွေောငျး သိသာ၏။ ကိုကိုမော ငျ့ကို ဂလဲ့စားပွနျခခြေငျြသညျ။ သူလုပျသလို လုပျပွခငျြသညျ။ မနကျက သူ့ကိုရမ်မကျကွညျ့ ကွညျ့ခဲ့သော ကိုထှနျးပုံရိပျကို မွငျ ယောငျလာ၏။ အဆငျသငျ့ပငျ ကိုထှနျးတဈယောကျလုံး ရှိနပွေီ။ မိနျးမကမျြးကပြွေီးဖွဈသော အိမျထောငျသညျယောကျြားတဈ ယောကျမို့ အထူးမွူဆှယျစရာပငျ လိုမညျမထငျတော့။
မနကျက သူ့ကိုကွညျ့သော အကွညျ့တှကေ လိုးခငျြလို့ကွညျ့မှနျး ကသှေယျမိုး အ တတျသိသညျ။ တှကွေုံ့ရမညျ့အရေးအခငျး အတှကျ ရငျခုနျလှုပျရှားနေ၏။ ကိုကိုမောငျကို ကောငျးကောငျးကွီး ဂလဲ့စားခရြေတော့မညျမို့ အကနြေပျကွီး ကနြေပျနသေညျ။ မနကျကတညျးက ခယျမဖွဈသူကိုကွညျ့ပွီး လီးတှတေောငျ စိတျတှထေခဲ့ရသော ကိုထှနျး တဈယောကျ သူ့ယောက်ခမတှမေရှိမှနျး သိ ၍ ညမှ မီးစငျကွညျ့ဖွုတျမညျဟု ကွံစညျထားရာ အခုတော့ ကာမပှဲတျောအုပျကွီးက သူ့ရှမှေ့ောကျသို့ တညျ့တညျ့ကွီး ရောကျလာပွီ။ တိုကျတိုကျဆိုငျဆိုငျပငျ အပွာဇာတျလမျးကလညျး ခယျမနှငျ့ခဲအိုဇာတျလမျး။ ကိုထှနျး တဈယောကျ ခုတငျဘေးတှငျ မတျတပျရပျရငျး ခယျ မဖွဈသူ၏ ဆူဖွိုးကဈြလဈသော ကိုယျလုံးကွီးကို စူးစူးစိုကျစိုကျကွညျ့ရငျး ဘယျပုံခငျးကငျြးရမညျကို အကှကျခစြဉျးစားနသေညျ။ ရာဂမီး တောငျကလညျး တဝုနျးဝုနျးပေါကျကှဲနသေညျ။ အိပျခငျြယောငျဆောငျနသေော ကသှေယျမိုးက လညျး ယခုအခြိနျထိ မလှုပျရှားသေးသညျ့အတှကျ အားမလိုအားမရဖွဈနရှောသညျ။ စောကျခေါငျးအတှငျးက လှိုကျကနဲ လှိုကျကနဲ လှုပျရှနသေလို ဖငျဖြားတှလေညျး တဆတျဆတျတုနျနေ၏။ ထှနျးထှနျးက အစီအစဉျခြ မှတျလိုကျပွီးဖွဈ၍ ပုဆိုးကို ခြှတျခြ လိုကျသညျ။ လမှေးအုံမဲမဲအုပျအုပျကွားမှ ထိုးထောငျထှကျနသေော လီးတနျကွီးမှာ မာကြောကဈြ တောကျနေ၏။ ထှားကွိုငျးသော အသှငျထကျ ကွီးမားကဈြလဈသော အသှငျကိုဆောငျနသေညျ။
လုံးပတျ (၄)လကျမ အရှညျ(၆)လကျမခှဲရှိ လီးတနျကွီးမှာ သှေးကွောကွီးတှေ ဖောငျးထလြှကျ ငေါကျကနဲ ငေါကျကနဲတောငျမတျ နေ ၏။ ကိုထှနျးက ခွထေောကျနှဈခြောငျးကို ဆှဲလြှကျ ကနျ့လနျ့ဖွတျအနအေထားဖွဈအောငျလုပျလိုကျသညျ။ ကနျ့လနျ့ဖွတျ အနအေထားအ ရောကျတှငျ ကသှေယျမိုးကလညျး ဗွုံးကနဲ ပကျလကျလှနျခလြိုကျသညျ။ အံ့သွထိတျလနျ့သော အမူအယာနှငျ့ “ ဟငျ….ကို….ကိုထှနျး…..ရှငျ….ရှငျ…..” ကသှေယျမိုး စကားပငျဆုံးအောငျမပွောလိုကျရ ကိုထှနျးက ထမီကိုဆှဲလှနျပွီး ပေါငျနှဈ ခြောငျးကိုဖွဲလြှကျ ရငျဘတျဆီဖိတှနျးလိုကျ သညျ။ ဖငျအုံဖှေးဖှေးကွီးက ခုတငျစောငျးနှငျ့ အံကကြှကျတိဖွဈနေ၏။ ခွထေောကျနှဈ ခြောငျးကို လကျတဈဖကျဖွငျ့ ထိနျးပေးရငျး ကနျြ လကျတဈဖကျက သူ့လီးတနျကွီးကို ဆုတျကိုငျကာ ဖောငျးကွှပွဲလနျနသေော စောကျဖုတျကွီးထဲသို့ တရှိနျထိုးသှငျးထညျ့လိုကျသညျ။ လိုး နကေမြို့ လီးက ဟိုခြျော ဒီခြျောလုံးဝမဖွဈဘဲ တနျးတနျးမတျမတျကွီး ဝငျသှား၏။ “ ဖှတျ….ဗွဈ….ဗွဈ….ဖှတျ…..ဖရဈ….ဗွဈ…..ဗွဈ” “ အီး အမလေးအား အား.သေ….သတေော့မယျ…..အမေ အား အမလေး…..အမလေး”တုတျခိုငျရှညျလြားပွီး မာကြောသော လီးတနျကွီးက တရှိနျထိုးဝငျလာသညျ့အတှကျ စောကျဖုတျအုံတခုလုံး ဖွိုးကနဲ ဖငျြးကနဲ ကငျြ ကနဲ ဆိမျ့ကနဲဖွဈသှား၏။
ပေါငျတနျဖှေးဖှေးတုတျတုတျကွီးမှာလညျး ဘေးသို့အစှမျးကုနျကားထှကျသှား၏။ ကနြေပျခွငျး အားရခွငျး နာ ကငျြခွငျးဝဒေနာ တှကေို တပွိုငျတညျးခံစားလိုကျရသညျ။ နှုတျခမျးကိုလညျး တငျးနအေောငျကိုကျထားလိုကျမိသညျ။ စောကျရတှေကေ စိုရှဲနပွေီ ဖွဈရာ နာကငျြသညျ့တိုငျ အလှနျကောငျးနေ၏။ ကိုထှနျးက ဆီးခုံခငျြးထိကပျသညျအထိ ဖိသှငျးထားရာမှ ပွနျဆှဲနှုတျသညျ။ စောကျ ရတှေကေ စိုရှဲနပွေီဖွဈ၍ အဆောငျ့ဒဏျကို ခံနိုငျနပွေီဖွဈကွောငျး သိလိုကျသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ရှကေို့ကုနျး၍ ကသှေယျမိုးခြိုငျးနှဈ ဖကျအတှငျး သူ့လကျကိုလြှိုသှငျးကာ ပခုံးသားနှဈဖကျကို ခပျတငျးတငျးဆုတျဖကျလိုကျသညျ။ ထို့နောကျ အသား ကုနျ ကွုံး၍ ဆောငျ့တော့သညျ။ “ ဖှတျ….ပွဈ….ဗွဈ….ဖှတျ….ဗွဈ….ဗွဈ….ဒုတျ….ဖှတျ.ဗွဈ” “အား အား အမလေး…..အား…..ကြှတျ ကြှတျ…..” ကသှေယျမိုး တဈယောကျ ပါးစပျက တအားအားအျောဟဈရငျး နာကောငျးလှသော ကာမအရသာထူးကွီးကို မကျြလုံးစုံ မှိတျရငျး အံ ကွိတျခံသညျ။ ဆောငျ့ခကျြတှကေ အရပျအနားမရှိ ပွငျးထနျလှသညျ။ စဈဦးကို ဒလကွမျးဖွိုသောနညျးဖွဈသညျ။
ကွာကွာစိမျလိုးနိုငျသူမှ သာ ဤနညျးဗြူဟာကို သုံးသငျ့သညျ။ လရထှေကျလှယျသူတို့ ဤနညျးကိုသုံးလြှငျ ဗုံးဗုံးလဲကရြှုံး တတျသညျ။ ထိုအခါ မိနျးမဖွဈသူ၏ အ ထငျသေးခွငျးကို ခံရတတျ၏။ ထို့နောကျ တဈသကျလုံးလငျနိုငျမိနျးမဘှဲ့ကို ယူတော့သညျ။ နှဈယောကျသား စညျးခကျြညီညီ လိုးနကွေ စဉျ… ကိုကိုမောငျ တဈယောကျ မဝဝေခေိုငျကို (၃)ခြီတိုငျတိုငျ အားရအောငျလိုးပွီး နောကျ မဝဝေခေိုငျ ဖလပျပွသှားသညျ့အတှကျ ရပျနား လိုကျသညျ။ သညျတော့မှ ကသှေယျမိုးနှငျ့ စာအတူကကျြရနျ ခြိနျးထားသညျ ကို သတိရ၏။ ပကျလကျကွီးမှိနျးနသေော မဝဝေခေိုငျကို ထားခဲ့၍ ပုဆိုးကပြာကယာဝတျကာ စာကကျြနကြေ ပနျးစက်ကူရုံသို့ အသော့ကလေးထှကျခဲ့သညျ။ကသှေယျမိုး ‘လှယျအိတျကလေး’ က စားပှဲခုံပျေါရောကျနေ၏။ ဟိုဟိုဒီဒီရှာ ကွညျ့သညျ မတှေ့။ အိမျထဲပွနျဝငျသညျ။ ဘာအရိပျအရောငျမှ မတှေ့။ ဟား….သှားပွီ သူနှငျ့ မဝဝေခေိုငျတို့ လိုးနတောကို ကေ သှယျမိုး သိသှားပွီ။ ကိုကိုမောငျ နောငျတအကွီးအကယျြရသှားသညျ။ ပနျးစက်ကူရုံသို့ အပွေးတပိုငျးနှငျ့ သှား၏။ ကသှေယျမိုး လှယျအိတျကလေးကို ကောကျလှယျလြှကျ ကသှေယျမိုး အိမျဖကျထှကျခဲ့သညျ။ ကနြေပျသညျအထိ ခြော့ရပေ တော့မညျ။ကေ သှယျမိုးတို့အိမျမှာ လူသူအရိပျအယောငျကငျးမဲ့ တိတျဆိတျနသေညျ။ လူကွီးတှလေညျး ရှိပုံမရ။
စိတျထဲပူသှားသညျ။ နာကွညျး ခကျြကွောငျ့ ကွိုးဆှဲခသြနေမှေဖွငျ့ တဈသကျလုံး ယူကွုံးမရဖွဈရတော့မညျ။ ပကျလကျကုလားထိုငျပျေါတှငျ မဂ်ဂဇငျးတဈအုပျတှခေဲ့ သညျ။ ကောကျမကွညျ့နိုငျဘဲ အိမျထဲဝငျလာခဲ့သညျ။ ကသှေယျမိုး အခနျးဆီ သို့ ခဉျြးကပျလိုကျသညျ။ အခနျးနားအရောကျတှငျ…. “ သှယျလေး….ကောငျးလားဟငျ….”“ အငျး….အငျး…..အမ လေး….ကောငျး….ကောငျးတယျ…..ကိုထှနျး….အမလေး…..ဆောငျ့….ဆောငျ့….နာ…နာဆောငျ့……အငျ့……အ….ကြှတျ….ကြှတျ…..”ကွားလိုကျရသောအသံက ကိုကိုမောငျ့ရငျဝကို လှံအစငျးပေါငျးတဈရာနှငျ့ တဈခကျြတညျးအထိုးခံလိုကျ ရသလို စူးနဈပူအောငျ့သှား ၏။ ကသှေယျမိုး အခနျးက ထရံနှငျ့ကာထားသညျမို့ ခြောငျးကွညျ့စရာအပေါကျကလေးတှရှေိနိုငျသညျ။ သို့သျော မငျးသား မငျးသမီးပုံတှေ အပွညျ့နီးပါးကပျထားသဖွငျ့ အပေါကျကိုမတှဘေဲ့ဖွဈနသေညျ။ ကံကောငျးထောကျမစှာပငျ ထောငျ့စှနျးတဈခုကှာပွဲနသေောနရောမှ အ တှငျးသို့ခြောငျးကွညျ့လိုကျသညျ။ကသှေယျမိုး တဈယောကျ ခုတငျပျေါတှငျ အဝတျအစား လုံးဝမရှိဘဲ ဒူးထောငျပေါငျကားအနအေထားဖွငျ့ ပကျလကျကွီးအလိုးခံကာ ဒူးထောကျလြှကျ လိုးပေးနသေော သူ့ ခဲအို၏ခါးကို တငျးကဈြနအေောငျ ဖကျထားသညျကို ဘှားကနဲ မွငျလိုကျရ၏။
“ အား….အမလေး…..ကောငျးလိုကျတာ ကိုထှနျးရယျ…..ညလညျး အခုလိုလိုးပေးအုံးနျော”“ အေးပါကှာ….စိတျခြ”ကိုကိုမောငျ့ မကျြလုံးတှေ ပွာဝသှေား၏။ ရငျထဲနာကငျြစူးအောငျ့သှားသညျ။ အသာလေးအခနျးနားက ခှာခဲ့သညျ။ ပကျလကျကုလား ထိုငျနား ရောကျသောအခါ မဂ်ဂဇငျးစာအုပျကို လှနျကွညျ့သညျ။ အပွာစာအုပျတဈအုပျ ထှကျလာ၏။ အပွာစာအုပျကို မဂ်ဂဇငျးပျေါတငျလြှကျ ထိုအပျေါမှ ကသှေယျမိုး လှယျအိတျကလေးကို တငျလိုကျသညျ။ ထို့နောကျ နှေးကှေးသောခွလှေမျးတို့ဖွငျ့ ထှကျခဲ့၏။ နှဈ ယောကျသား လိုးအားရသောအခါ အဝတျအစားမြားပွနျဝတျ၍ အပွငျထှကျခဲ့ကွသညျ။ ကိုထှနျးလညျး မွို့ထဲသှားမညျဟုဆိုကာ ထှကျသှား၏။ ပကျလကျကုလားထိုငျပျေါမှာ ထိုငျမညျအပွု သူမလှယျအိတျကလေးကို တှေ့ လိုကျရသညျ့အတှကျ နှလုံးသှေးတှေ ခြောကျ ခွားမတတျ ထိတျလနျ့သှား၏။ ပနျးစက်ကူပငျအောကျမှာ သူမ မကေ့နျြခဲ့သော “ လှယျအိတျကလေး ”။ ပွီးပါပွီ။
ကိုကိုမောင် (၇)တန်းအောင်တော့ သူ့ဦးလေးရှိရာ မန္တလေး စိန်ပန်းရပ်သို့ ရောက်လာ၏။ စောစောကတော့ ကျောင်းဆက်တက်ရန် စိတ်ကူးမရှိခဲ့။ ဦးလေးဖြစ်သူ ကိုမြင့်ဟန်က ကျောင်းဆက်ထားဖို့ တာဝန်ယူသဖြင့် သူ့အမေ မခင်ဝင်းက သဘောတူလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဦးလေးဖြစ်သူ ကိုမြင့်ဟန်မှာ သံရေကျိုလုပ်ငန်းဖြင့် ကြီးပွားနေ၏။ အလုပ်ရုံက သတ်သတ်၊ အိမ်က သတ်သတ် ဖြစ်သည်။ ကိုကိုမောင်ကို မန္တလေးသို့ပို့ခြင်းမှာ ကျောင်းဆက်ထားဖို့ မဟုတ်ဘဲ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်တစ်ခု သင်ကြား ရန်ဖြစ်သည်။ ဒီရောက်မှ အစီအ စဉ်တွေ ပြောင်းကုန်ခြင်းဖြစ်၏။ ကိုမြင့်ဟန် မိန်းမ မနှင်းရီက ငွေကုန်မည့်ကိစ္စမို့ သိပ်တော့မ ကျေနပ်။ သို့သော် ကိုမြင့်ဟန်ကို ကြောက်ရ သည့်အတွက် အောင့်သက်သက်နှင့် နေလိုက်ရသည်။ကိုကိုမောင်ကလည်း သူ့ဦးလေး မိန်းမ မကျေနပ်မှန်း ရိပ်မိသည်။ ထို့ကြောင့် မနှင်းရီနှင့် အဆင်ပြေအောင် ပေါင်းရမည်ကို နားလည် လိုက်သည်။
ကျောင်းဖွင့်ဖုိ့က တစ်လခွဲလောက်လိုသေး၏။ ထို့ကြောင့် အလုပ်ရုံနှင့် အိမ် ကူးချည်သန်းချည်လုပ်ကာ မနှင်းရီ တာဝန်များ ကို ဝိုင်းကူလုပ်ပေးသည်။ မပျင်းမရိ မခိုမကပ် လုပ်ကိုင်ပေးတတ်သဖြင့် တစ်ပတ်အတွင်း မနှင်းရီက သူ့ကို သဘောကျသွားသည်။ မ နှင်းရီက အိမ်ဆိုင်ဖွင့်ထားသည်ဖြစ်ရာ လိုအပ်သောပစ္စည်းများကို ဈေးချိုသို့ သွားဝယ်ပေးရသည်။ ကိုကိုမောင် မရောက်ခင်က ဖတ်ဖတ်မောအောင် လုပ်ခဲ့ရသော မနှင်းရီ တစ်ယောက် ယခုတော့ တဝက်မက သက်သာနေသဖြင့် ကိုကိုမောင့်အပေါ် သဘောကျ ကြည်ဖြူနေသည်။ ကိုကိုမောင် လုပ်ကိုင်ပေးသမျှကို လုပ်အားခဟု သဘောထားကာ ကျောင်းမုန့်ဖိုးအဖြစ် ယခုကတည်းက စုပေး ထား၏။ ဦးလေးဖြစ်သူ ကိုမြင့်ဟန်မှာ မနက်မိုးလင်းသည်နှင့် အလုပ်ရုံထွက်သည်။ ည မိုးချုပ်မှ ပြန်လာလေ့ရှိ သည်။ များသောအားဖြင့် ည ကိုးနာရီခွဲ ဆယ်နာရီမှ ပြန်လာလေ့ရှိသည်။ သည်တော့ ကိုကိုမောင် တစ်ယောက် မနှင်းရီအတွက် အ ကောင်းဆုံး ကူဖော်လောင်ဖက်ဖြစ်လာသည်။ ပြီးတော့ သူတို့မှာ သားသမီးမထွန်းကားသဖြင့် ကိုကိုမောင်ကို သားတစ်ယောက် သဖွယ် သဘောထား ဆက်ဆံလာသည်။
ကျောင်းစဖွင့်သည့်နေ့က မနှင်းရီကိုယ်တိုင် ကျောင်းလိုက်အပ်သည်။ မနှင်းရီက သူနှင့်ရင်းနှီးသော ကေသွယ်မိုးနှင့် ကိုကိုမောင်ကို မိတ်ဆက်ပေးပြီး လိုအပ်သော အကူအညီများပေးရန် အတန်တန်မှာခဲ့၏။ ကေသွယ်မိုးကလည်း (၇)တန်းအောင် (၈)တန်းတက်ရ မည့်သူ ဖြစ်ရာ တောသားလေး ကိုကိုမောင်အဖို့ အစစအရာရာ အဆင်ပြေသွားသည်။ မနှင်းရီက အပြန်တွင် ကေသွယ်မိုးကိုပါ မုန့်ဖိုးငါးရာပေးခဲ့ သည်။ (မှတ်ချက်။ ။ ထိုစဉ်က ဆန်တစ်ပြည် (၁၂၅)ကျပ် ခန့်သာရှိသေးသည်။) ကိုကိုမောင့်ကို အကြောင်းပြု၍ မုန့်ဖိုးငါးရာရသ ဖြင့် ကေသွယ်မိုး တစ်ယောက် ကိုကိုမောင့်အပေါ် ငယ်ပေါင်းသဖွယ် ခင်မင်ရင်းနှီးသွားသည်။ လိုအပ်သည့် အကူအညီများကို စေတနာ ထက်သန်စွာ အကူအညီပေးသည်။ နောင်လည်း ရလာဦးမည့် အခွင့်အရေးများကို မျှော်မြင်ကာ ကိုကို မောင်ကို သူ့လူအဖြစ် သတ်မှတ် လိုက်တော့၏။ထိုနေ့မှစ၍ သူတို့နှစ်ယောက်မှာ သွားအတူ စားအတူ တပူးတွဲတွဲဖြစ်ခဲ့ကြသည်။
တက္ကသိုလ်ရောက်တော့လည်း အတူတူပင် ကေသွယ်မိုး မိဘများက သာမန်လက်လုပ်လက်စားတွေမို့ စားနိုင်သောက်နိုင်ရုံသာရှိ ကြ၏။ ကေသွယ်မိုး အဖေက မြင်းလှည်းမောင်း သည်။ ကိုကိုမောင့် ဦးလေး အလုပ်ရုံက ပစ္စည်းများကို ကေသွယ်မိုး အဖေကပင် ဒိုင်ခံသယ်ပို့ပေးရ၏။ ကေသွယ်မိုး အမေကတော့ ကမ်း နားဈေးမှာ ကုန်စိမ်းရောင်းသည်။ မနှင်းရီနှင့် ရွာဆွေရွာမျိုးဖြစ်သည်။ မ နှင်းရီက မန္တလေးဇာတိမဟုတ်။ အထက် ကသာဖက်မှဖြစ်သည်။ ဈေးရောင်းရင်း သူ့ဦးလေးနှင့် ညားကြခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လူကြီးခြင်း ခင်မင်ရင်းနှီးကြပြီးဖြစ်၏။ သို့သော် ရပ်ကွက်ခြင်းခြား၏။ တစ်ပြကျော်ကျော်ခန့်ဝေးသည်။ ကေသွယ်မိုးနှင့် ကိုကိုမောင်တို့မှာ တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် ရင်းနှီးလာကြသည်။ တစ်ဦးကို တစ်ဦး သံယောဇဉ်လေးတွေ နှောင်ဖွဲ့လာကြသည်။ဤသို့ဖြင့် (၁၀)တန်းအောင်ပြီး တက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ်တွင် မနှင်းရီ တစ်ယောက် သားအိမ်ကင်ဆာနှင့် ကွယ်လွန်သွားသည်။ မိဘ သဖွယ် သံယော ဇဉ်တွယ်ခဲ့ရသူ ကိုကိုမောင် တစ်ယောက် အတော်လေး နှမြောတသ ဝမ်းနည်းပူဆွေးခဲ့ရသည်။ ဦးလေးဖြစ်သူမှာ လည်း သောက ပရိဒေဝ စိတ်ဖြင့် အရက်တွေ ဖိသောက်လာသည်။ လုပ်ငန်းကလည်း အတော်လေးဖြစ်ထွန်းသည်။ သည်ကြားထဲ ချဲက တစ်သောင်းဖိုး ပေါက်လိုက်သေး၏။ ချဲ တစ်သောင်းဖိုး ပေါက်ပုံ က ဂမ္ဘီရဆန်၏။ မနှင်းရီ ကွယ်လွန်ပြီး (၄၅) ရက် အရောက် တွင် ကိုကိုမောင် အိပ်မက် မက်၏။ အဒေါ်ဖြစ်သူ မနှင်းရီက အိပ်မက်ထဲတွင် သူ့အမေအရင်းဖြစ်နေ၏။
အခုလို မထင်မှတ်ဘဲ သားနှင့်ခွဲရတာကို ရင်နာလို့မဆုံးဖြစ်ရကြောင်း။ သို့သော် အမေက အမြဲစောင့်ရှောက် သွားမှာဖြစ်ကြောင်း။ မီးဖိုခန်း ကြောင်အိမ်အောက်ဆုံးထပ်ရှိ အံဝှက်ထဲတွင် ငွေသုံးသောင်းရှိကြောင်း။ (၂)သောင်းကို သံဃဒါနဆွမ်း လောင်း၍ ကျန်တစ် သောင်းကို အမေပေးတဲ့ ဂဏန်းကို ထိုးဖြစ်အောင် ထိုးစေချင်ကြောင်း အတန်တန်မှာပြီး ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ သူ ပေးတဲ့ ဂဏန်းက (၃၄၃) (၁၆-၇-၂၀၀၆) ဖြစ်သည်။ မနှင်းရီ ပျောက်ကွယ်သွားသောအခါ ကိုကိုမောင်က အော်ဟစ်ငိုယိုပြီး နောက်က ပြေး လိုက်သည်။ “ အမေ…အမေ…အမေရေ…အမေ…”အခန်းထဲက အော်သံကြား၍ ကိုမြင့်ဟန် လန့်နိုးကာ ကိုကိုမောင့် အခန်းထဲ ရောက်လာသည်။ မျက်ရည်တွေက စီးကျနေပြီး အိပ်မက် ထဲ ယောင်အော်နေမှန်းသိသွား၍“ ကိုကိုမောင်…ဟေ့…ကိုကို မောင်”လက်မောင်းကိုပုတ်ပြီး နှိုးလိုက်၏။ ကိုကိုမောင် ဝုန်းကနဲထထိုင်သည်။ မျက်လုံးကို ပွတ်သပ်ကြည့်တော့ ဦးလေးဖြစ်သူက ခုတင်ပေါ် သူ့ဘေးတွင်ရောက်နေသည်။“ ဟာ…ဦးလေး…အိပ်မက် မက်နေတာဗျ…”ကိုကိုမောင်က သူမြင်သမျှကို အပြည့်အစုံ ပြောပြလိုက်သည်။ နာရီကြည့်လိုက်တော့ နံနက် (၃)နာရီခွဲရှိနေပြီ။
ကိုကိုမောင့် အိပ်မက် ကြောင့် ကိုမြင့်ဟန်မှာ သူ့မိန်းမကို ပိုပြီးသတိရမိသည်။ ကိုကိုမောင်ကို ပြန်အိပ်ခိုင်းပြီး ညကလက်ကျန် အရက်ကို သောက်ရင်း သူ့မိန်းမ အကြောင်းတွေထိုင်တွေးရင်း မိုးလင်းခဲ့သည်။ အိပ်မက်အတိုင်း ကြောင်အိမ်ထဲရှာကြည့်ရာ ငွေသုံး သောင်း တကယ်တွေ့ရ၏။ မနှင်းရီ မှာ သည့်အတိုင်း ဆွမ်းလောင်းသည်။ ချဲထိုးသည်။ အမှန်တကယ်လည်း ပေါက်ခဲ့သည်။ နောက် တစ်ရက်တွင် ကိုမြင့်ဟန်က ကိုကိုမောင့် အမေကို လှမ်းမှာသည်။ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်လူကြီးများရှေ့မှောက်တွင် စာချုပ်စာတမ်း နှင့်တကွ ကိုကိုမောင်ကို တရားဝင် မွေးစား လိုက်တော့သည်။ (၁၅)ရက်ခန့်နေပြီး မပြန်ခင်တစ်ရက်အလို ညတွင်“ ငါ့မောင်…မင်း လည်း အရက်တွေသိပ်မသောက်ပါနဲ့ကွယ်…ကျန်းမာရေးလည်း ဂရုစိုက်ပါဦး…အမ ရောက်ကတည်းက မင်းကို အကဲ ခတ်နေတာ မင်းသောက်ပုံက သိပ်လွန်လွန်းနေတယ်…အမကတော့ အိမ်ထောင်ပြုစေချင်တယ်…အခုမှ (၃၉)နှစ်ရှိသေးတာပဲ…စီးပွားရေး က လည်း ပြည့်စုံနေတဲ့ဥစ္စာ…အထိန်းအကွပ်မရှိရင် ဒီထက်ပိုဆိုးသွားမယ်…” ကိုမြင့်ဟန် တစ်ယောက် သူ့အမ ပြောတာကို နားထောင်နေ၏။ ဘာမှတော့ ပြန်မပြော။ သို့သော် သူ့မျက်နှာတွင် ပြုံးယောင်သမ်းနေ ၏။ ကိုကိုမောင့် အမေပြန်သွား၍ (၃)လ မြောက် အရောက်တွင် ကိုမြင့်ဟန် တစ်ယောက် မုံရွာဘက် ခရီးထွက်ရာမှ အပြန် မိန်းမတစ် ယောက်ပါလာသည်။
နာမည်က မဝေဝေခိုင် ဟုခေါ်သည်။ အသက်က (၂၉) (၃၀) ဝန်းကျင်သာရှိသေး၏။ ချောချော တောင့်တောင့် လုံး ကြီးပေါက်လှ။ ဦးလေးက မဝေဝေခိုင်နှင့် မိတ်ဆက်ပေးသည်။ တခြား ဘာမှအထွေအထူးမပြော။ ထိုနေ့မှစ၍ မဝေဝေခိုင်သည် ဦးလေး၏ ဇနီး မယားအဖြစ် ရောက်ရှိသွားပါတော့သည်။ ကိုကိုမောင်နှင့် ကေသွယ်မိုးတို့မှာ နှုတ်ကဖွင့်မပြောကြသည့်တိုင် အတွင်းစိတ်က တစ် ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်ကြိုက်နေကြ သည်။ (၈)တန်းမှစ၍ ယခုတက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ်အထိ အတူသွား အတူစား အတူလာ မို့ သူငယ်ချင်းတွေရော နှစ်ဖက်မိဘများကပါ သဘောတူထားပြီးဖြစ်သည်။ ယနေ့ ကျူရှင်စာတွေ အပြန်အလှန်ကူးကြရန် ကေ သွယ်မိုး တစ်ယောက် ကိုကိုမောင့်ထံ သွားဖို့ ဖီးလိမ်းပြင် ဆင်နေ၏။ စိတ်ကူးလေးယဉ် သီချင်းလေးတအေးအေးနှင့် ဖြစ်သည်။ သူ့ အမေနှင့် အဖေတို့ကလည်း ကျောက်ဆည်ဖက် ဘုရားဖူးသွား ကြသဖြင့် အိမ်မှာ သူတစ်ယောက်ထဲရှိသည်။ (၁၀)နာရီအ ရောက်လာခဲ့မည်ဟု ကိုကိုမောင်ကိုမှာလိုက်ပြီးဖြစ်သည်။ အခု (၉)နာရီ (၁၅) မိနစ်ခန့်ရှိနေပြီ။ တရားဝင် ရည်းစားမဖြစ်သေးသည့် တိုင် ချစ်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသူမို့ ရင်တွေခုန်မိ၏။ အခုနောက်ပိုင်း ကိုကိုမောင့် အကြည့်တွေက နှလုံးတုန် ရင်ခုန်သည်းထိတ် စရာတွေဖြစ်သည်။ကေသွယ်မိုးကလည်း အပျိုကြီးဖားဖားဖြစ်ကာ အဖုအထစ်အရှိုက်အဝိုက် ကောက်ကြောင်းတွေက ပီပြင်ဖွံ့ဖြိုး အလှတွေတိုးလျှက်ရှိ သလို ကိုကိုမောင်ကလည်း ရင်အုပ်ကားကားနှင့် မိန်းမသားတွေ စွဲမက်စေသော ယောက်ျားပီသသော ရုပ်လက္ခဏာတွေ ထင်ရှားပေါ် လွင်လာ၏။
ကေသွယ်မိုး တစ်ယောက် ကျူရှင်စာအုပ်တွေ လွယ်အိတ်ထဲထည့်နေစဉ် စစ်ကိုင်းတွင်နေသော သူ့အမ ယောက်ျား ထွန်းထွန်း ရောက်လာ၏။ ထွန်းထွန်းက အသက်(၃၀)ခန့်ရှိပြီ။ သူ့အမထက် (၅)နှစ်ခန့်ကြီးပြီး ကေသွယ်မိုးထက် (၁၀)နှစ်ခန့်ကြီးသည်။ ထမင်းစားချိန်မို့ ထမင်းပြင်ပေးရသည်။ သူ့ယောက္ခမတွေ မရှိမှန်းသိ၍ ထွန်းထွန်း တစ်ယောက် ခယ်မဖြစ်သူ ကေသွယ်မိုးကို ခပ် ရဲရဲပင် ကြည့်သည်။ မတွေ့ရတာကြာပြီမို့ ခယ်မဖြစ်သူ တစ်တစ်ရစ်ရစ် စွင့်စွင့်ကားကား အပျိုကြီးဖားဖားဖြစ်လို့နေသည်။ သေးသွယ်သော ခါးအောက်ပိုင်းရှိ အိုးကြီးနှစ်မွှာမှာ ဝိုင်းစက်ကားထွက်နေပြီး နောက်ဖက်သို့ မို့မောက်လျှက်အိစက်လုံးတစ်နေ၏။ ဖြောင့်စင်းဖြိုးတုတ်သော ပေါင်တံကြီးတွေက ထွန်းထွန်း ရင်ကို လှုပ်ခတ်စေသည်။ ကေသွယ်မိုး ဟင်းပန်းကန်နှင့် ပြန် ရောက်လာ၏။ ဟင်းပန်းကန်ကို စားပွဲပေါ် ငုံ့ချပေး၏။ လည်ဟိုက်အင်္ကျီအတွင်းမှ ပြည့်လျှံထွက်နေသော နို့အုံသားတွေက ဖြူ ဖွေးအိထွေးနေ၏။ လှုပ်ရှား မှုနှင့်အတူ နို့ကြီးနှစ်လုံးမှာ တသိမ့်သိမ့်နှင့် လှုပ်ခါနေသည်။ ရမ္မက်ကြွစရာ မြင်ကွင်းကို အနီးကပ်မြင် နေရသော ထွန်းထွန်း တစ်ယောက် ရာဂသွေးတွေ ပူနွေးလာ၏။ အပြင်သွားဖို့ ပြင်ထား ပြီဖြစ်၍ ကေသွယ်မိုးကိုယ်မှ မွှေးရနံ့တွေ သင်းပျံ့လျှက်ရှိသည်။
ကေသွယ်မိုး တစ်ယောက် သူ့ကို မရိုးမသားကြည့်နေသော ခဲအို၏ ရမ္မက်မျက်လုံးများကို မမြင်တွေ့ရသေး။ ကိုကိုမောင်နှင့် တွေ့ရ မည့် အရေးကိုသာ တွေးလျှက် စိတ်ကူးယဉ်ကြည်နူးလျှက်ရှိသည်။ လည်ဟိုက်အင်္ကျီကိုလည်း တမင်သက်သက်ရွေးဝတ်ခဲ့၏။ သူတို့နှစ် ယောက် စာကျက် စာကူးလျှင် အိမ်နောက်ဖေးရှိ ပန်းစက္ကူပင်ကြီးအောက်တွင် ပြုလုပ်ကြမြဲဖြစ်သည်။ ထိုပန်းစက္ကူပင် ကြီးအောက်တွင် ဆက်တီခုံများရှိ၏။ စားပွဲဟိုဖက်ထိပ် ဒီဖက်ထိပ်မှထိုင်၍ စာကူးကြ၏။ စာငုံ့ကူးလျှင် တင်းရင်းမို့မောက်နေသော သူ့နို့အုံဖွေးဖွေးနုနုကြီးကို ကိုကိုမောင် မြင်တွေ့စေရန် လည်ဟိုက်အင်္ကျီကို တမင်ရွေးဝတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ “ ရော့…ထမင်းအုံး လေ ကိုထွန်း…”ကုန်လုလုဖြစ်သော ထမင်းပန်းကန်ထဲသို့ ထမင်းငုံ့ထည့်ပေးလိုက်စဉ် ဝင်းမွတ်နုထွတ်သော နို့ကြီးနှစ်မွှာကို တဝင်း ဝင်း တလက်လက် တောက်ပနေသော ရမ္မက်မျက်လုံးတို့ဖြင့် စူးစူးဝါးဝါးကြီးကြည့်နေသော ခဲအိုဖြစ်သူ ထွန်းထွန်းကို ဖျပ်ကနဲမြင် လိုက်၏။ ကေသွယ်မိုး မသိ ချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်သည်။ သေချာသည်ထက် သေချာအောင် စမ်းသပ်လို၍ ကေသွယ်မိုး တစ် ယောက် ရေအိုးစင်ရှိရာသို့ ရေသွား ခပ်သည်။ သူမ၏ ထွားကားဝိုင်းစက်သော ဖင်ဆုံကြီးကို တမင်လှုပ်ခါအောင် လုပ်ပြသည်။ ထွန်းထွန်း တစ်ယောက် ကာမရာဂတွေ တဝင်းဝင်းတောက်နေသော မျက်လုံးတို့ဖြင့် ကြည့်နေမည်ကို စိတ်က အလိုလိုသိနေ၏။ ပို၍သေချာအောင်“ ကိုထွန်း…ထမင်းထည့်အုံးမလား…”ထွန်းထွန်း တစ်ယောက် အငိုက်မိသွား၍ ရုတ်တရက် စကားမပြောနိုင်ဘဲ ဖြစ်သွားသည်။ ပြီးတော့မှ “ အဲ…အဲ…တော်…တော်ပြီဟ”ထမင်းနင်သံကြီးဖြင့် အထစ်ထစ် အငေါ့ငေါ့ပြောလိုက်မိသည်။
“ ဦးလေးတို့က ဘယ်အချိန်ပြန်လာမှာလဲ”“ ဟင့်အင်း…ဒီနေ့ ပြန်မလာဘူး…ညအိပ်မှာ”ထွန်းထွန်း ရင်ထဲ ဘုရားပွဲလှည့်သွား၏။ အသေအချာကြည့်လေ စွဲမက်စရာကောင်းလေဖြစ်နေသည့် ခယ်မကို ထွန်းထွန်း တဝကြီး ကြည့်လိုက်၏။ သူ့မိန်းမအပျိုတုန်းက ထက် သာလွန်သောအလှပစ္စည်းတွေ တစုတဝေးကြီးရှိနေကြောင်း အကဲခတ်မိ၏။ ထိုစဉ် ကေသွယ် မိုးမှာ ချာတိတ်ရှိသေးသည်။“ ကဲ…ကိုထွန်း ထမင်းစားပြီးရင် အေးအေးဆေးဆေး နားအုံးကျနော် သူငယ်ချင်းအိမ် စာသွားကူးအုံးမယ်…”“ အေးအေး…သွား သွား”ကေသွယ်မိုး တစ်ယောက် လွယ်အိတ်လွယ်၍ ကိုကိုမောင့်ထံ ထွက်လာခဲ့သည်။ သူ့ကိုယ်ပေါ်တွင် ကပ်ပါလျှက်ရှိသော အဖုအထစ် အမို့အမောက် အစွင့်အကား အသားအုံအသားဆိုင်တို့၏ တန်ဖိုးကြီးမားလှပုံကို လက်တွေ့သိလိုက်၍ အလှမာန်ဝင့်ကာ ကျော့ကျော့မော့ မော့နှင့် ဘဝင်မြင့်လျှက်ရှိပါတော့သည်။ နာရီကြည့်လိုက်တော့ (၁၁)နာရီခွဲပြီ။“ ဟောတော့…(၁၀)နာရီ ချိန်း ထားတာ ဒုက္ခပါဘဲ”ကေသွယ်မိုး တစ်ယောက် ခပ်သွက်သွက်သုတ်ခြေတင်လိုက်ပါတော့သည်။ ကိုကိုမောင် ကျူရှင်ကပြန်လာ တော့ (၉)နာရီ (၄၅)မိနစ် ရှိပြီ။ ဖြစ်နိုင်လျှင် ကေသွယ်မိုးကို ရည်းစားစကားပြောမည်။ အခွင့်သာလျှင် ဖြုတ်မည်။ ကေသွယ်မိုး၏ အပြောအဆို အကြည့်အရှုအမူအယာတွေက သူဘာလုပ်လုပ် သဘောတူကြည်ဖြူမည့် လက္ခဏာတွေ ပြသ လျှက်ရှိ၏။
လက်နှေးလို့မဖြစ်။ အိမ်ရှေ့ရောက်တော့ ဝင်းတံခါးမှာ သော့ခတ်ထားသည်။ သူ့မိထွေးဝမ်းကွဲ မရှိကြောင်း သေချာ၏။ ဦးလေး ဖြစ် သူက အလုပ်ရုံမှာသာနေသည်မို့ ဒီအချိန်အိမ်မှာနေလေ့မရှိ။ ကိုကိုမောင် တစ်ယောက် သူ့စိတ်ကူး အကောင်အထည်ဖော်နိုင်တော့ မည်မို့ အူမြူးနေသည်။ ကေသွယ်မိုး၏ တင်းတင်းမို့မို့ နို့အုံနှစ်မွှာနှင့် ပြည့်တင်းစွင့်ကားသော တင်ဆုံထွားထွားတစ်တစ်ကြီးကို မြင် ယောင် မိကာ သူ့ပေါင်ကြားက ဒုတ်တန်ကြီးမှာ မတ်ကနဲ တောင်ထလာသည်။ ဘဝပေးကုသိုလ်အရ ယောက်ျားပီသစွာ ချောမောရုံ မျှမက စံချိန်မှီ သော ဒုတ်ကြီးကိုပါ ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ သူ့ ဒုတ်တန်ကြီးမှာ အရှည် (၇)လက်မခွဲ လုံးပတ် (၄)လက်မခွဲမို့ အားရ ကျေနပ်စရာကောင်းလှသည်။ ကေသွယ်မိုး ခံနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်။ သို့သော် ရှာဖွေမှတ်သားထားသော ကာမဗဟုသုတတို့ဖြင့် ချော့ မော့နှူးနှပ်၍ ဖြုတ်ရမည်သာ။ တွေးရင်း တွေးရင်း လီးကြီးက ကြွ သထက်ကြွ မတ်သထက်မတ်တောင်လာ၏။ ကိုကိုမောင် သူကိုင် သော သော့ဖြင့် တံခါးဖွင့်ဝင်လိုက်သည်။ပြီးတော့ ပြန်ပိတ်၏။ ကေသွယ်မိုး လာလျှင် ဘဲလ်တီးနေကျဖြစ်သည်။ အပေါ်ထပ် တက်၍ ကြာကြာလိုးနိုင်အောင် ညဈေးက အသင့်ဝယ်ထားသော လီးကြီး ဆေးကို လိမ်းလိုက်သည်။ သောက်ဆေး ကိုတော့ ကေ သွယ်မိုးလာမှ သောက်မည်။ ပထမဆုံး စတင်ဖိုက်ရမည့်ပွဲမို့ ယောက်ျားအစွမ်း သတ္တိပြနိုင်မှဖြစ်မည်။
ကြာကြာစိမ်လိုးနိုင်လေ မိန်းမစွဲလေဟူသော စကားကို ကိုကိုမောင် သိထား၏။ နဂိုကပင် တောင်မတ်နေပြီဖြစ်သော လီးတန်ကြီး မှာ ဆေးလိမ်းလိုက်သောအခါ သံမဏိချောင်းကြီးကဲ့သို့ မာကျောလာသည်။ ဒစ်ဆံ ပြဲကြီးကလည်း ဝင်းပြောင်တင်းကားနေ၏။ “ ကရင် ကရင် ကရင်”ကိုကိုမောင် ပုဆိုးကို ကပျာကယာဝတ်၍ အပေါ်ထပ်မှဆင်းလာ၏။ တံခါးဝသို့ရောက်သောအခါ ကေသွယ် မိုး မဟုတ်ဘဲ မိထွေးဝမ်း ကွဲ မဝေဝေခိုင် ဖြစ်နေ၏။ တံခါးဖွင့်၍ သော့ဖြုတ်ရုံမျှသာရှိသေး မဝေဝေခိုင်က တံခါးကိုဆွဲဟကာ အလောတကော ဝင်လိုက်သည်။ သည်တော့ ရပ်လျှက်ရှိသော ကိုကိုမောင့် ကိုယ်လုံးနှင့် မဝေဝေခိုင် ကိုယ်လုံးမှာ ထိထိမိမိကြီး ပွတ်တိုက်သွား၏။ မဝေဝေခိုင်၏ ကြီးမား စွင့်ကားသော ဖင်ဆုံသားကြီးက ကိုကိုမောင်၏ ပေါင်ရင်းကို အိကနဲ ဖိမိသွား၏။ ထို့အတူ ဆူဖြိုးတင်းအိသော နို့ကြီးနှစ်မွှာကလည်း ကိုကို မောင်၏ နံစောင်းကို နွေးထွေးအိစက်စွာ ဖိကပ်သွားသည်။
မဝေဝေခိုင် အတော်ကြာသည်အထိ ဖိကပ်ထား၏။ ပြီးမှ အိမ်ထဲသို့ ခပ်သွက် သွက် ဝင်သွားသည်။ စောစောကပင် ကိုယ့်အတွေး နှင့်ကိုယ် စိတ်တွေထနေသဖြင့် ကိုကိုမောင် တကိုယ်လုံးရှိန်းဖိန်းတုန်လှုပ်သွား၏။ လိမ်းဆေးကလည်း တရိပ်ရိပ်သတ္တိပြလျှက်၏။ ကိုကိုမောင် တစ်ယောက် ကေသွယ်မိုးကိုမေ့သွား၏။ ထို့ကြောင့် ဘာကိုမှသတိမရတော့ဘဲ မဝေဝေခိုင် နောက်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ တံခါးကိုလည်း သည်အတိုင်းဖွင့်ထားခဲ့မိသည်။ ခြံဝင်းနှင့် အိမ်မကြီးက ပေ (၄၀)လောက် ကွာသည်။ ကိုကိုမောင် အိမ်တွင်းရောက် သွား တော့ မဝေဝေခိုင်က ဖိနပ်ကိုကုန်းကောက်ရင်း အခန်းထဲဝင်သွားသည်။ ကုန်းလိုက်သည့်အခိုက်တွင် ဖင်ဆုံထွားထွားကြီးက အစွမ်းကုန် စွင့်ကားသွားသည်။ ထိုမြင်ကွင်းကြောင့် ကိုကိုမောင့် ပေါင်ကြားက လီးတန်ကြီးမှာ တင်းကနဲ တင်းကနဲဖြစ်သွားသည်။ နိမ့်ချီ မြင့်ချီဖြင့် စည်းချက်ကျကျ လှုပ်ခါသွားသော ဖင်ဆုံကြီးက ကိုကိုမောင့် မျက်စိထဲစွဲသွားသည်။ ကိုကိုမောင် တစ်ယောက် သူ့ ဦးလေးနှင့် မဝေဝေခိုင် တို့ လိုးကြတာကို ချောင်းချောင်းကြည့်ဖူး၏။ မဝေဝေခိုင်က အပေးကောင်းသည်။ ရခါစကတော့ ဦးလေးက လည်း အတော်လိုးနိုင်သည်။
မဝေဝေခိုင်၏ အပေးကောင်းခြင်း၊ အပြုစုကောင်းခြင်းတို့ကြောင့် ဦးလေးဖြစ်သူ သောကမှာ ပါးလျှစပြုလာသည်။ အရက်ကို လည်း အတိုင်းအဆနှင့်သောက်တော့၏။ မနှင်းရီလောက် မချစ်သည့်တိုင် သူ့အတိုင်းအတာနှင့်သူ မဝေဝေခိုင်အပေါ်မှာ သာယာ တပ်မက်လာ သည်။ တစ်နေ့ ဦးလေးအစောကြီး အိမ်ပြန်လာသည်။ ခါတိုင်း သည်အချိန်ပြန်လာလေ့မရှိ။ မျက်နှာကြောလည်း တင်းနေသည်။ အပေါ် ထပ် အခန်းထဲစာကျက်နေသော ကိုကိုမောင့်ထံ ရောက်လာသည်။“ ကိုကိုမောင်…မဝေ မရောက်သေးဘူး လား”“ ဟုတ်ကဲ့ ဦးလေး“ တောက်…ဒီဖာသယ်မတော့…သိကြသေးတာပေါ့ကွာ…” ည (၉)နာရီထိုးတော့ မဝေဝေခိုင် ပြန် ရောက်လာသည်။ ဦးလေးက အခန်းထဲကစောင့်ရင်း အရက်သောက်နေသည်။ အခြေအနေ ထူးခြားတော့မည်ကိုသိ၍ ကိုကိုမောင် ကလည်း အပေါ်ထပ်မှ ချောင်းကြည့်နေသည်။ ဦးလေးကိုတွေ့တော့ မဝေဝေခိုင် အံ့သြသွား၏။ သို့ သော် ဟန်လုပ်၍“ ဟင်…အကို ကြီးက အစောကြီးရောက်နေတယ်…”ဦးလေးက ဘာစကားမှမပြောဘဲ အရက်သောက်ရင်း ခပ်တည်တည်ကြည့်နေသည်။ မဝေ ဝေခိုင်က ဦးလေးရှေ့မှာပင် အဝတ်အစား လဲသည်။ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီနှင့် ဘရာစီယာသာကျန်ရှိနေစဉ် ဦးလေးထံသို့လာပြီး ဘေးကပူးကပ်ထိုင်လိုက်သည်။
“ ဒီနေ့…ဆာပြီနဲ့တူတယ်…ဟုတ်လား…”ပြောပြောဆိုဆို ပုဆိုးကိုလှန်၍ ဦးလေး လီးတန်ကြီးကို ပွတ်သပ်ဆုတ်ဆွပေးသည်။ ဦးလေးက မလှုပ်။ အရက်ကိုသာ ဆက်သောက် နေ၏။ ဦးလေး၏ မတုန်မလှုပ်အမူအယာကြောင့်“ ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲကွာ… ခပ်တည်တည်ကြီး…ကြည့်ပါလား ငေါင်တောင်တောင်နဲ့ လှုပ်လည်း မလှုပ်ဘူး…”မဝေဝေခိုင်က ငေါင်စင်းစင်းဖြစ်နေသော လီးတန် ကြီးကို လက်ဖဝါးပေါ်တင်၍ (၂)ချက် (၃)ချက် ဆုတ်ရင်းပြောသည်။ “ မင်း…နေ့လည်က ဘယ်သွားသေးလဲ…”“ မြို့သစ်က ညီမ ဆီပါ…” “ တစ်ယောက်ထဲလား…”“ တစ်ယောက်ထဲပေါ့ အကိုကြီးကလဲ” “ မင်း သွားတဲ့အိမ်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်မှာ နေ့လည်က ငါ ပစ္စည်းသွားပို့တယ်…မင်းကို ကောင်တစ်ကောင်ရဲ့ ဆိုင်ကယ်နောက်မှာ တွေ့လိုက်တယ် အဲဒါ အကိုပါလို့တော့ မပြောနဲ့…ခါးဖက် ပြီး လိုက်သွားတာ အသေအချာမြင်လိုက်တယ် မင်း…ငါနဲ့ မပေါင်းချင်ရင် အခု ဆင်းသွားလို့ရတယ်နော်” “ အဟင်း…ဟင်း အကိုပါ လို့ မပြောနဲ့ဆိုပေမယ့် ပြောရမှာပဲ အကိုကြီးရေအဲဒါ အကိုဝမ်းကွဲအစစ်ပါ”မဝေဝေခိုင်က ဆက်တီခုံပေါ်က ဆင်းလိုက်ပြီး ဒူးတုတ် ထိုင်လျှက် ဦးလေးလီးကြီးကို ပါးစပ်ဖြင့် မှုတ်ပေးနေသည်။ဦးလေးကမူ ဘာမှ မပြောတော့ဘဲ သူလုပ်သမျှ အသာငြိမ်ခံနေသည်။
အတော်ကြာတော့ လီးကြီးက မတောင်ချင့် တောင်ချင် တောင်လာသည်။ မဝေဝေခိုင် ဘောင်းဘီနှင့် ဘရာစီယာကို ချွတ်ပစ်လိုက် ပြီး ဦးလေးလက်ကို သူ့နို့အုံကြီးပေါ်တင်ပေးလိုက်သည်။ ဦးလေးက နို့ကြီးနှစ်လုံးကို တလှည့် စီ ဆုတ်ချေပေးနေ၏။ မဝေဝေခိုင်က ဒစ်ကြီးကို ပြဲသထက်ပြဲအောင်ဖြဲပြီး ပါးစပ်ဖြင့် တေ့စုပ်ပေးသည်။ ဦးလေး ပုံစံကြည့်ရသည်မှာ သိထားသလောက်မပြောတော့ဘဲ အချောင်ရသော မိန်းမတစ်ယောက်ကို အချောင်လုပ်ရသလိုမျိုး ပေါ် လွင်နေသည်။ ကိုကိုမောင် တစ်ယောက် ဦးလေးနှင့် နေရာ ချင်းလဲလိုက်ချင်သည်။ ကြည့်ရင်း ကြည့်ရင်း မနေနိုင်တော့၍ ဂွင်းတိုက်လိုက် ၏။ လရေတွေက ဗျင်းကနဲ ပန်းထွက်ကုန်သည်။ နှစ် နှစ်ကာကာ မချစ်သည့်တိုင် သွေးသားဆန္ဒအရ ထကြွလာပုံရ၏။ မဝေဝေခိုင်ကို ခုတင်ပေါ် ကန့်လန့်ဖြတ် ပက်လက်အိပ်ခိုင်းပြီး ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ပင့်ထောင်ဖြဲကားပြီး မတ်တပ်ရပ်၍ ဆောင့်ပါတော့သည်။ (၃)မိနစ် လောက်အရောက်တွင် ပြီးသွားပုံရ၏။ ဦးလေး သူ့လီးတန်ကြီးကို ဆွဲချွတ်လိုက်သည်။ စောက်ဖုတ်ထဲက ထွက်လာသည်နှင့် လီးတန်ကြီး က ပျော့ခွေငိုက်ဆင်းနေတော့၏။
အရက်တစ်ခွက်သောက်ပြီး ခုတင်ပေါ်တက်အိပ်တော့သည်။ မကြာခင် ဦးလေး အိပ်ပျော်သွားတော့၏။ သည်တော့မှ စောစောက ဆက်တီခုံပေါ်ပြန်ထိုင်ပြီး သူ့နို့ကြီးနှစ်လုံးကို သူ့ဖာသာ ဆုတ်ချေနေ၏။ (၁၅)မိနစ်လောက်ကြာသောအခါ ခုတင်ခြေရင်းရှိ ဘီရိုဆီ သို့သွား ပြီး ဘီရိုအောက်လက်နှိုက်သည်။ လက်ထဲတွင် အဝတ်နှင့်ပတ်ထားသော ပစ္စည်းတစ်ခုပါလာသည်။ ခုံပေါ်ပြန်ထိုင်ပြီး အဝတ်ကိုဖြေလိုက် သည်။ ရာဘာလီးတုကြီးဖြစ်နေ၏။ ကိုကိုမောင် အံ့သြသွားသည်။ မဝေဝေခိုင်က ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုဖြဲကာ လီး တုကြီးကို သူ့စောက်ဖုတ် ထဲ ထိုးသွင်းလိုက်ပြီး အချက်ပေါင်းများစွာ အသွင်းအထုတ်ပြုလုပ်ပါတော့သည်။ (၂၅)မိနစ်ခန့် အရောက် တွင် ခြေထောက်နှစ်ချောင်း ဆန့်တန်းလျှက် တဆတ်ဆတ်တုန်လှုပ်ကာ ငြိမ်သက်သွားတော့သည်။ ထိုနေ့ကပင် ကိုကိုမောင့် စိတ် ထဲ မဝေဝေခိုင်ကို လိုးခွင့်ရှိကြောင်း လိုးလို့ရကြောင်း သဘောပေါက်သွားခဲ့၏။ သို့သော် ကေသွယ်မိုး မျက်နှာကို မြင်ယောင်မိ၍ မ လိုးဖြစ်ခဲ့ပါ။ သူ ကေသွယ်မိုးကို တကယ် ချစ်သည်။ နှစ်နှစ်ကာကာချစ်ပါသည်။ယနေ့….ငဲ့ကွက်မှုတံတိုင်းကြီး ပြိုကျသွားခဲ့ပြီ။
ဒီကိစ္စ ဖြစ်တော့မည်ဆိုတာ ကိုကိုမောင် ရိပ်မိခဲ့သည်။ သူ့ရဲ့ ကြီးမားစွင့်ကားလှတဲ့ ဖင်ဆုံသားအိအိကြီးဖြင့် သူ့ပေါင်ကို တမင်ဖိပွတ် သွားသည်။ ပြီးတော့ ဆူဖြိုးတင်းအိလှသော နို့ကြီးနှစ်လုံးကလည်း သူ့နံစောင်းကို ပွတ်တိုက်သွားသည်။ စောစောကပင် ကေ သွယ်မိုးကို အပြတ်လိုးရန် လီးကြီးဆေးတွေလိမ်းထားပြီး ကြာကြာလိုးနိုင်သည့်ဆေးကိုပါ သောက်ထားသည်။ သန်းခေါင်ထက် ည ဥ့်မနက်တော့ပါ။ ဤမျှအထာတွေ ပြနေပါလျက်နဲ့မှ ကိုကိုမောင် ငြိမ်သက်နေလျှင် ယောက်ျားမဟုတ်တော့ဘဲ နွားသတ္တဝါ ဖြစ်ရပေ တော့မည်။ ကဲ သေဖို့ သာပြင်ပေတော့ မဝေဝေခိုင်ရေ။ စိတ်ထဲကကြိမ်းဝါးလျှက် မဝေဝေခိုင် အခန်းထဲစွတ်ဝင်လိုက်သည်။ မဝေ ဝေခိုင်က ကိုယ်ပေါ်က အဝတ် အစားတွေကို တစ်ခုမကျန်ချွတ်ပြီး အဝတ်အစားလဲရန် ပြင်ဆင်နေသည်။ အခန်းထဲစွတ်ဝင်လာ သော ကိုကိုမောင့်ကို မြင်တော့ ထမီတစ် ထည်ကို ကပျာကယာစွတ်ပြီး ခြုံထားလိုက်၏။ ကိုကိုမောင်က အခန်းတံခါးကို ဂျက်ထိုး ပိတ်လိုက်သည်။ မဝေဝေခိုင်က သူလုပ်သမျှကို ဘာစကားမှမပြောဘဲ ကျေနပ်သောအကြည့်နှင့် ကြည့်နေသည်။
မဝေဝေခိုင် ကြည့်နေခိုက်မှာပင် ပုဆိုးနှင့်အင်္ကျီကို ချွတ်ပြီး ကုလားထိုင်ပေါ်ပစ်တင်လိုက်သည်။ ရင်အုပ်သားတွေက ယောက်ျား ပီသ စွာ ဖုထစ်နေပြီး ကျစ်လစ်သန်စွမ်းသော ကိုယ်လုံးက မဝေဝေခိုင်ကို ဖမ်းစားထားသည်။ ထို့ထက် သည်းထိတ်ရင်ဖိုစရာ မြင်ကွင်းက ကိုကို မောင့် ပေါင်ကြားရှိ တဆတ်ဆတ်တောင်မတ်နေသော လီးတန်တုတ်တုတ်ကြီးပင် ဖြစ်သည်။ လီးတန်ကြီး ပတ်ပတ်လည်တွင် သွေးကြော ကြီးတွေက အပြိုင်းပြိုင်းထကာ ဖုဖေါင်းနေသည်။ မဝေဝေခိုင် တဏှာရာဂအားကြီးကြောင်း ကိုကို မောင် သိထားပြီးဖြစ်သည်။ ဦးလေးနှင့် လိုးတာအားမရတိုင်း လီးတုနှင့် စခန်းသွားရတာကိုလည်း သိပြီးဖြစ်သည်။ သံမဏိချောင်း ကြီးကဲ့သို့ မာကျောသန်စွမ်းလှသော လီးတန်တုတ်တုတ်ကြီးကို တပ်မက်စွာကြည့်နေသော မဝေဝေခိုင်၏ ကာမရာဂ စိတ်များ တစ တစပြင်းထန်လာသည်။ စောက်ဖုတ်ကြီးက တဖြည်းဖြည်း တင်းမာဖေါင်းကားလာသည်။ စောက်ခေါင်းဝတလျှောက်မှာ လည်း တ ရွရွနှင့်ဖြစ်လာသည်။ သူမရင်ထဲ ဖြိုးကနဲ ဖျင်းကနဲဖြစ်သွားပြီး စောက်ဖုတ်ထဲက စစ်ကနဲ ယားယားတက်လာသည်။ ကိုကိုမောင့် လီးတန်ကြီးကို အားပါးတရ ဆုပ်ကိုင်လိုက်၏။“ ကဲ…ကြာပါတယ် မောင်လေးရယ်…မမ မနေနိုင်တော့ဘူး…မင်းလီးကြီးကို တအား ခံချင်လာပြီ…လိုးပေးတော့နော်…”မဝေဝေခိုင် တစ်ယောက် မွတ်သိပ်တောင့်တစွာ ပြောရင်း ခုတင်ဘောင်ပေါ်လက်ထောက်ကာ ဖင်ကုန်းပေးတော့သည်။
ပြူးဝင်း အက်ကားနေသော ဖင်ဆုံထွားထွားအိအိကြီးနှစ်မွှာက ကိုကိုမောင့်ကို တဒင်္ဂအသက်ရှူရပ်သွားစေသည်။ ဖင်အိုးကြီးနှစ်မွှာ ကြားမှ နောက် သို့ကန်ထွက်နေသော စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားထူထူကြီးတွေက အညိုရောင်သမ်းနေပြီး အတွင်းပိုင်းမှာမူ နီရဲ နေ၏။ ကိုကိုမောင် စောက် ဖုတ်ကြီးကို လက်ဝါးနှင့် ပင့်၍သုံးလေးချက် ပွတ်ပေးလိုက်ရာ မဝေဝေခိုင်ဖင်ဆုံကြီးက အထက်သို့ မြောက်တက်လာသည်။သူ့လက်ဖဝါး မှာ စောက်ရေတွေစိုရွှဲသွားသည်။ ထို့နောက် ဒစ်ပြဲကြီးကို စောက်ဖုတ်အဝသို့တေ့ထားလိုက် ပြီး ခါးနှစ်ဖက်ကို အကျအနဆုတ်ကာ ဖိသွင်းလိုက်သည်။ ပူနွေးရှိန်းမြသော အတွေ့က တကိုယ်လုံးကို ဆိမ့်တက်သွားစေသည်။“ ဇွိ…ဇွစ်…ဗြစ်…ဗြစ်…ဗရစ်…ဗြစ်…ဖွတ် လီးတန်ကြီးက စောက်ခေါင်းအတွင်းသို့ တထစ်ခြင်းနစ်ဝင်သွားသည်။ မဝေဝေခိုင် ဖင်အိုး ကြီးနှစ်မွှာက ကြွတက်ခါရမ်းသွား၏။ အားရ ကျေနပ်သော စိတ်တွေက သူမ တကိုယ်လုံးလွှမ်းဖုံးသွားတော့သည်။ ကိုကိုမောင်က ခါးကိုမတ်မတ်ထားပြီး ပူနွေးနူးညံ့သော စောက်ဖုတ် ကြီးထဲကို လီးတန်ကြီးမြှုပ်သွင်း၍ ခေတ္တစိမ်ထားလိုက်သည်။ နူးညံ့ သလောက် ညှစ်အားစုပ်အား ကောင်းလှသော စောက်ဖုတ်အတွေ့က ကိုကိုမောင့် ရာဂမီးကို အလျှံကြီးစွာ တောက်လောင်စေ၏။
တဏှာရာဂအားကြီးလှသော မဝေဝေခိုင် တစ်ယောက် သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးထဲ သို့ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီး နစ်ဝင်နေသော လီး အရသာကို မိန်းမူးကျေနပ်စွာ ခံစားနေစဉ် ဖင်ဆုံကြီးကို ပွတ်ပေးနေသဖြင့် အူထဲအသဲထဲ ယားယားတက်လာသည်။ ဖင်ဆုံကတ ဆင့် ကျောပြင်နုနုဆီသို့ ရောက်သွား၏။ ကျောပြင်မှတဆင့် အောက်သို့လျှိုဝင်ကာ နုရွတင်းအိနေ သော နို့အုံမို့မို့ကြီးကို ဆုတ်ချေ ပွတ်ဆွပေးသည်။ အားရကျေနပ်သည်အထိ ဆုတ်ချေပွတ်ဆွပြီးမှ အုံအရင်းကို ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ပြီး ဖင်ကျောကြီးကို ရှုံ့ ခွက်၍ လီးကြီးကို ပြန်နှုတ် သည်။ နို့အုံကြီးကို ခပ်ဖွဖွလေးချေပေးရင်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းပြန်ဖိသွင်းသည်။“ အင့်…အမေ့ အား အား အီးအင်း ရှီး .ကျွတ်ကျွတ်”လီးကြီးကို အရှိန်နှင့်ဆောင့်သွင်းလိုက်သဖြင့် မဝေဝေခိုင် တကိုယ်လုံး ဆတ်ကနဲကော့တက်သွားပြီး စောက်ဖုတ်အုံကြီးတစ်ခုလုံး ပူ ရှိန်းကျင်တက်သွားသည်။
ဆောင့်ချက်တွေက ပြင်းထန်သလောက် အလွန်ထိမိကောင်းမွန်သည်။ ကြာလေကောင်းလေ ကောင်းလေဆိမ့်လေမို့ မဝေဝေခိုင်၏ ရာဂမီးမှာ အားကြီးသထက် အားကြီးလာတော့သည်။ ကိုကိုမောင်၏ ပြင်းထန်သောဆောင့်ချက်နှင့်အညီ သူမ၏ ဖင်ဆုံကြီး ကို ကော့၍တ မျိုး မြှောက်၍တဖုံ ဝိုက်၍တနည်း အခံကြီးခံပေးနေသည်။ ကိုကိုမောင်က ဆုတ်ကိုင်ထားသော နို့ကြီးနှစ်လုံးကို လွှတ်ထားလိုက်ပြီး ခါးစပ်ကိုမြဲမြဲတင်းတင်းဆုတ်ကိုင်လျှက် ဒူးကိုအနည်းငယ် ညွှတ်ပြီး ပင့်ပင့်ထိုးပြန်၏။ ထိုသို့ ဒူးညွှတ်ပြီး ပင့် ဆောင့်လိုးလိုက်သောအခါ ပြူးတင်းမတ်တောင်နေသော စောက်စိငုတ် ညိုညိုကြီးကို အရှိန်နှင့် ဒလစပ် ပွတ်ထိုးနေသလိုဖြစ် သည့်အတွက် မဝေဝေခိုင် တစ်ယောက် အကောင်းလွန်ကာ ဖင်သားတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်ခါနေ ၏။
လေထဲတွင် မြောက်သွားသလို ခံစားလိုက်ရပြီး ထောပတ်မြစ်ထဲအစိမ်ခံလိုက်ရသည့်နှယ် အီဆိမ့်သွားသည်။“ .ကောင်း….ကောင်း လိုက်တာကွာ….အမလေးအရမ်းထိတာပဲ…..အင့်…..အ” ဆောင့်ချက်တွေက မီးပွင့်ထွက်မလား အောက်မေ့ရအောင် သန်လွန်းမြန် လွန်းလှသည်။ မဝေဝေခိုင်ကလည်း အားကျမခံ ကော့၍ ကော့၍ ခံသည်။ တခေါင်းလုံးရမ်းခါလျှက် တဆတ်ဆတ်တုန်ကာ ငါးရံ့ ပြာလူးဖြစ်နေပါတော့သည်။ တင်ပါးခွက်ကြောကြီးတွေ ရှုံ့ခွက်၍ နောက်သို့ပစ်ပစ်ခံနေသည်မှာ ကြောက်ဖွယ်လိလိ ကြက်သီးထ စရာကြီးဖြစ်သည်။ မဝေဝေခိုင်လို မိန်းမမျိုးက တဏှာရာဂအားကြီး၏။ရမ္မက်သွေးသားသောင်းကြမ်းသည်။ ထို့ကြောင့် သာမန်လီး ကို ဖြုံလေ့မရှိ။ အခု ကိုကိုမောင့် လီးကြီးမှာ စံချိန်မှီရုံမျှမက လွန်၍ပင်နေတော့ သည်။ အလိုးအဆောင့်အညှောင့်တွေကလည်း သန်မြန်ရုံမျှမက ကြမ်းလည်းကြမ်း၏။ မဝေဝေခိုင် အလွန်တောင့်တခဲ့ရသော လီးမျိုးကို အခုမှပင် ခံရတော့၏။ ကိုကိုမောင်က အောက်မှပင့်ထိုးပြီးလိုးနေရာမှ ပုံစံကိုပြောင်းလိုက်၏။ လီးတန်ကြီးကို ဒစ်အရင်းထိရောက်အောင်ထုတ်၏။ ပြီးမှ ခပ် ပြင်းပြင်း ဆောင့်ဆောင့်လိုးသည်။မဝေဝေခိုင် သံကုန်ညှစ်၍ အော်ဟစ်မိပါတော့၏။ အရှက်အကြောက်ဆိုတာလည်း လုံးဝမရှိတော့။ ပင်ကိုယ်အစွမ်း ဆေးအစွမ်း ကြောင့် ကိုကိုမောင့် ဆောင့်ချက်တွေကလည်း အံ့မခန်းပင်။
ကေသွယ်မိုး တစ်ယောက် စိတ်ကူးမျိုးစုံတို့ဖြင့် ကွန့်မြူးလျှက် ကိုကိုမောင်တို့ခြံထဲ ရောက်လာသည်။ နာရီကြည့်မိတော့ (၁၀)နာရီ (၃၀)မိနစ်ရှိနေပြီ။ ချိန်းထားတာက (၁၀)နာရီ အခု မိနစ်(၃၀) ပင်လွန်နေပြီဖြစ်၍ ကိုကိုမောင် ဒေါဖောင်းနေလောက်ရော့မည်။ ချော့ နည်း တွေကိုလည်း စဉ်းစားလိုက်၏။ ကေသွယ်မိုးက ကိုကိုမောင် စောင့်နေလောက်ပြီအထင်နှင့် အိမ်ထဲမဝင်တော့ဘဲ သူတို့နှစ် ယောက် စာ ကျက်နေကျဖြစ်သည့် ပန်းစက္ကူရုံကြီးရှိရာသို့ တန်းသွားသည်။စက္ကူပန်းပင်အောက်ရောက်တော့ ကိုကိုမောင် မရှိ စားပွဲပေါ်တွင် ဘာစာအုပ်မှမရှိ။ ပန်းခြောက်တွေက စားပွဲနှင့် ကုလားထိုင်ပေါ် တွင် ကျရောက်နေသည်ဖြစ်၍ ကိုကိုမောင် လုံးဝမ လာသေးသည်မှာ သေချာသွားသည်။ စိတ်ထဲထူးဆန်းသလို အောက်မေ့မိသည်။ လွယ် အိတ်ကို စားပွဲပေါ်ပစ်ချလိုက်ပြီး အိမ်ကြီး ဆီသို့ပြန်သွားသည်။ အဆင်သင့်ပွင့်နေသော နောက်ဖေးပေါက်မှ ဝင်ခဲ့၏။ ကိုကိုမောင်က အ ပေါ်ထပ်မှာနေသဖြင့် လှေကားပေါ် တက်မည်အပြု လှေကားနှင့်ကပ်လျက်ရှိသော မဝေဝေခိုင် အခန်းထဲက ညီးညူလှုပ်ရှားသံတွေ ကြား လိုက်ရသည်။ အပေါ်ထပ် တက်မည့် ခြေလှမ်းတွေက တုန့်ကနဲရပ်ဆိုင်းသွားပြီး အခန်းနားသို့ တိုးကပ်လိုက်သည်။
အခန်းကို (၃)ထပ်သား အကောင်းစားဖြင့်ကာရံထားသည့်အတွက် အပေါက်မရှိအောင် လုံခြုံသည့်တိုင် အုတ်နံရံကဲ့သို့ ထူထူထဲထဲ မရှိရုံမျှမက လေဝင်လေထွက် ကောင်းအောင် အပေါ်ပိုင်းတွင် သံဇကာတွေတပ်ဆင်ထားသည့်အတွက် အခန်းတွင်းက အသံတွေ မှာ အတိုင်းသားကြားနေရ၏။ စောစောက ဝင်လာကာစ ဗြုန်းကနဲမို့ မကြားမိသော်လည်း အသေအချာနားထောင်လိုက်သောအခါ“ .အား အ.ကောင်း.ကောင်းလိုက်တာကွာ….အမလေး….ထိ….ထိလိုက်တာ ဇွတ်.ဗြိ အင့် အင့် အ….ဆောင့်….အ မေ့….နာ…နာဆောင့်….အ…..မမပြီး…ပြီး..တော့မယ်.ဗြစ်….ဗြိ….ဗြစ်….ဒုတ်….ဗြစ်….ဒုတ်…..ဗြစ်….ဗြစ်….အမလေးး အား ဟား ကျွတ်….ဟုတ်….ဟုတ်ပြီ…..အင့်…အင့်….အ….” တော်တော်လေး ပက်ပက်စက်စက်လိုးနေပုံရသည်။ စောက်ဖုတ်သံ၊ လီးသံ၊ ငြီး သံတွေက တခန်းလုံးဆူညံပွက်လောရိုက်နေ၏။ မောင်လေးဆိုသူမှာ ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်းမသိ။ ကိုကိုမောင့် မိထွေးဝမ်းကွဲ မဝေဝေ ခိုင်က ပွေမည့်ပွမ်မည့်ပုံစံကြီးမို့ သူ့ဦးလေးမရှိခိုက် တ ခြား ကောင်တစ်ကောင်နှင့် ချိန်းတွယ်နေပုံရသည်။
“ နာနာဆောင့်…..ဟုတ်ပြီ…..ဟုတ်ပြီ…..အမလေး….ကောင်း….ကောင်းလိုက်တာ…”“ ဖွတ်….ဖွပ်….ဖွတ်….ပလွတ်….ဗြစ်….ဗြ စ်….ဒုတ်….ဗြစ်….ဒုတ်….ပြစ်…..ဗြစ်”“ မမ…ကောင်းလားဟင်”“ အင်း….အမလေး…..ကောင်း….ကောင်း တယ်….နာ….နာ….အင်.” ကေသွယ်မိုး တစ်ယောက် ကိုကိုမောင့် အသံကိုကြားလိုက်ရသောအခါ တကိုယ်လုံး မိုးကြိုးအပြစ်ခံ လိုက်ရသလို တုန်လှုပ်ချောက် ခြားသွား၏။ နှလုံးသားနုနုကို သောကအပူလုံးကြီးက ဒုန်းကနဲဝင်ဆောင့်သည်။ ပြာဝေမူးမိုက် သွား၏။ အခန်းနံရံကိုမှီ၍ မျက်လုံးကို မှိတ် ထားသည်။ နာကြည်းခံပြင်းစိတ်တွေက တရိပ်ရိပ်တက်လာသည်။ မာနတရားက ဦးနှောက်ထဲရောက်လာ၏။ ကေသွယ်မိုး အံကိုတင်း တင်းကြိတ်ရင်း ချာကနဲလှည့်ထွက်ခဲ့သည်။ ပေါင်ကြားရှိ စောက်ဖုတ်ထဲမှ စောက်ရေပူတချို့ ပြစ်ကနဲထွက်သွားခဲ့ပြီ။ ထွန်းထွန်း တစ်ယောက် အိမ်အပြင်ဖက်ရှိ ပက်လက်ကုလားထိုင်ပေါ်တွင် အပြာစာအုပ် တစ်အုပ်ကို အပျိုစင်မဂ္ဂဇင်းထဲညှပ်၍ ဇိမ်နှင့် ဖတ်နေစဉ် သူ့ကိုဖြတ်ကျော်သွားသော ကေသွယ်မိုးကို အနီးရောက်မှ မြင်လိုက်၏။ စောစောကလွယ်အိတ်နှင့် ထွက်သွားပြီး အခုလွယ် အိတ် ပြန်မပါ။
ပြီးတော့ မျက်နှာကလည်း နီမြန်းထူအန်းနေပြီး ငိုထားပုံရသည်။ ကေသွယ်မိုးက ငုတ်တုတ်ကြီးတွေ့နေရသော သူ့ကို တောင် နှုတ်ဆက်မနေတော့ဘဲ အိမ်ထဲတန်းဝင်သွားသည်။ ပုံစံက ရည်းစားပူမိလာသောပုံမျိုး ထွန်းထွန်း ပြုံးလိုက်သည်။ အပြာစာအုပ်ကို တောင် သိမ်းဆည်းဖို့ရာ သတိမထားမိတော့ဘဲ သည်အတိုင်းညှပ်ခဲ့ပြီး ကေသွယ်မိုးနောက် ထလိုက်ခဲ့သည်။ သူ့အခန်း ပေါက်ရောက်တော့ ခယ်မချောက ခေါင်းအုံးကို မျက်နှာအပ်၍ မှောက်ရက်ကြီး အိပ်နေ၏။ ထမီက ဒူးခေါင်းအထက်နားထိ ရောက် နေ၏။ ပေါင်တံတုတ်တုတ်နှစ်ချောင်းက ဘေးသုိ့ခပ်ကားကားအနေအထားဖြစ် သည်။ ဖြူဖွေးဝင်းမွတ်သော ခြေသလုံးသား ပြည့် ပြည့်လေးက စွဲမက်စရာကောင်းလှသည်။ ဆူဖြိုးထွားတစ်သောဖင်ဆုံကြီးက သိသိသာသာ ခုံးမောက်နေသည်။ မျက်နှာက တဖက်သို့ စောင်းထားသည်။ တချက် တချက် သိမ့်ကနဲ သိမ့်ကနဲတုန်ခါသွားသည့်အတွက် ငိုရှိုက်နေကြောင်း သိသာ၏။ ကိုကိုမော င့်ကို ဂလဲ့စားပြန်ချေချင်သည်။ သူလုပ်သလို လုပ်ပြချင်သည်။ မနက်က သူ့ကိုရမ္မက်ကြည့် ကြည့်ခဲ့သော ကိုထွန်းပုံရိပ်ကို မြင် ယောင်လာ၏။ အဆင်သင့်ပင် ကိုထွန်းတစ်ယောက်လုံး ရှိနေပြီ။ မိန်းမကျမ်းကျေပြီးဖြစ်သော အိမ်ထောင်သည်ယောက်ျားတစ် ယောက်မို့ အထူးမြူဆွယ်စရာပင် လိုမည်မထင်တော့။
မနက်က သူ့ကိုကြည့်သော အကြည့်တွေက လိုးချင်လို့ကြည့်မှန်း ကေသွယ်မိုး အ တတ်သိသည်။ တွေ့ကြုံရမည့်အရေးအခင်း အတွက် ရင်ခုန်လှုပ်ရှားနေ၏။ ကိုကိုမောင်ကို ကောင်းကောင်းကြီး ဂလဲ့စားချေရတော့မည်မို့ အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်နေသည်။ မနက်ကတည်းက ခယ်မဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီး လီးတွေတောင် စိတ်တွေထခဲ့ရသော ကိုထွန်း တစ်ယောက် သူ့ယောက္ခမတွေမရှိမှန်း သိ ၍ ညမှ မီးစင်ကြည့်ဖြုတ်မည်ဟု ကြံစည်ထားရာ အခုတော့ ကာမပွဲတော်အုပ်ကြီးက သူ့ရှေ့မှောက်သို့ တည့်တည့်ကြီး ရောက်လာပြီ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပင် အပြာဇာတ်လမ်းကလည်း ခယ်မနှင့်ခဲအိုဇာတ်လမ်း။ ကိုထွန်း တစ်ယောက် ခုတင်ဘေးတွင် မတ်တပ်ရပ်ရင်း ခယ် မဖြစ်သူ၏ ဆူဖြိုးကျစ်လစ်သော ကိုယ်လုံးကြီးကို စူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်ရင်း ဘယ်ပုံခင်းကျင်းရမည်ကို အကွက်ချစဉ်းစားနေသည်။ ရာဂမီး တောင်ကလည်း တဝုန်းဝုန်းပေါက်ကွဲနေသည်။ အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေသော ကေသွယ်မိုးက လည်း ယခုအချိန်ထိ မလှုပ်ရှားသေးသည့်အတွက် အားမလိုအားမရဖြစ်နေရှာသည်။ စောက်ခေါင်းအတွင်းက လှိုက်ကနဲ လှိုက်ကနဲ လှုပ်ရွနေသလို ဖင်ဖျားတွေလည်း တဆတ်ဆတ်တုန်နေ၏။ ထွန်းထွန်းက အစီအစဉ်ချ မှတ်လိုက်ပြီးဖြစ်၍ ပုဆိုးကို ချွတ်ချ လိုက်သည်။ လမွှေးအုံမဲမဲအုပ်အုပ်ကြားမှ ထိုးထောင်ထွက်နေသော လီးတန်ကြီးမှာ မာကျောကျစ် တောက်နေ၏။ ထွားကြိုင်းသော အသွင်ထက် ကြီးမားကျစ်လစ်သော အသွင်ကိုဆောင်နေသည်။
လုံးပတ် (၄)လက်မ အရှည်(၆)လက်မခွဲရှိ လီးတန်ကြီးမှာ သွေးကြောကြီးတွေ ဖောင်းထလျှက် ငေါက်ကနဲ ငေါက်ကနဲတောင်မတ် နေ ၏။ ကိုထွန်းက ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ဆွဲလျှက် ကန့်လန့်ဖြတ်အနေအထားဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်သည်။ ကန့်လန့်ဖြတ် အနေအထားအ ရောက်တွင် ကေသွယ်မိုးကလည်း ဗြုံးကနဲ ပက်လက်လှန်ချလိုက်သည်။ အံ့သြထိတ်လန့်သော အမူအယာနှင့် “ ဟင်….ကို….ကိုထွန်း…..ရှင်….ရှင်…..” ကေသွယ်မိုး စကားပင်ဆုံးအောင်မပြောလိုက်ရ ကိုထွန်းက ထမီကိုဆွဲလှန်ပြီး ပေါင်နှစ် ချောင်းကိုဖြဲလျှက် ရင်ဘတ်ဆီဖိတွန်းလိုက် သည်။ ဖင်အုံဖွေးဖွေးကြီးက ခုတင်စောင်းနှင့် အံကျကွက်တိဖြစ်နေ၏။ ခြေထောက်နှစ် ချောင်းကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ထိန်းပေးရင်း ကျန် လက်တစ်ဖက်က သူ့လီးတန်ကြီးကို ဆုတ်ကိုင်ကာ ဖောင်းကြွပြဲလန်နေသော စောက်ဖုတ်ကြီးထဲသို့ တရှိန်ထိုးသွင်းထည့်လိုက်သည်။ လိုး နေကျမို့ လီးက ဟိုချော် ဒီချော်လုံးဝမဖြစ်ဘဲ တန်းတန်းမတ်မတ်ကြီး ဝင်သွား၏။ “ ဖွတ်….ဗြစ်….ဗြစ်….ဖွတ်…..ဖရစ်….ဗြစ်…..ဗြစ်” “ အီး အမလေးအား အား.သေ….သေတော့မယ်…..အမေ အား အမလေး…..အမလေး”တုတ်ခိုင်ရှည်လျားပြီး မာကျောသော လီးတန်ကြီးက တရှိန်ထိုးဝင်လာသည့်အတွက် စောက်ဖုတ်အုံတခုလုံး ဖြိုးကနဲ ဖျင်းကနဲ ကျင် ကနဲ ဆိမ့်ကနဲဖြစ်သွား၏။
ပေါင်တန်ဖွေးဖွေးတုတ်တုတ်ကြီးမှာလည်း ဘေးသို့အစွမ်းကုန်ကားထွက်သွား၏။ ကျေနပ်ခြင်း အားရခြင်း နာ ကျင်ခြင်းဝေဒနာ တွေကို တပြိုင်တည်းခံစားလိုက်ရသည်။ နှုတ်ခမ်းကိုလည်း တင်းနေအောင်ကိုက်ထားလိုက်မိသည်။ စောက်ရေတွေက စိုရွှဲနေပြီ ဖြစ်ရာ နာကျင်သည့်တိုင် အလွန်ကောင်းနေ၏။ ကိုထွန်းက ဆီးခုံချင်းထိကပ်သည်အထိ ဖိသွင်းထားရာမှ ပြန်ဆွဲနှုတ်သည်။ စောက် ရေတွေက စိုရွှဲနေပြီဖြစ်၍ အဆောင့်ဒဏ်ကို ခံနိုင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် ရှေ့ကိုကုန်း၍ ကေသွယ်မိုးချိုင်းနှစ် ဖက်အတွင်း သူ့လက်ကိုလျှိုသွင်းကာ ပခုံးသားနှစ်ဖက်ကို ခပ်တင်းတင်းဆုတ်ဖက်လိုက်သည်။ ထို့နောက် အသား ကုန် ကြုံး၍ ဆောင့်တော့သည်။ “ ဖွတ်….ပြစ်….ဗြစ်….ဖွတ်….ဗြစ်….ဗြစ်….ဒုတ်….ဖွတ်.ဗြစ်” “အား အား အမလေး…..အား…..ကျွတ် ကျွတ်…..” ကေသွယ်မိုး တစ်ယောက် ပါးစပ်က တအားအားအော်ဟစ်ရင်း နာကောင်းလှသော ကာမအရသာထူးကြီးကို မျက်လုံးစုံ မှိတ်ရင်း အံ ကြိတ်ခံသည်။ ဆောင့်ချက်တွေက အရပ်အနားမရှိ ပြင်းထန်လှသည်။ စစ်ဦးကို ဒလကြမ်းဖြိုသောနည်းဖြစ်သည်။
ကြာကြာစိမ်လိုးနိုင်သူမှ သာ ဤနည်းဗျူဟာကို သုံးသင့်သည်။ လရေထွက်လွယ်သူတို့ ဤနည်းကိုသုံးလျှင် ဗုံးဗုံးလဲကျရှုံး တတ်သည်။ ထိုအခါ မိန်းမဖြစ်သူ၏ အ ထင်သေးခြင်းကို ခံရတတ်၏။ ထို့နောက် တစ်သက်လုံးလင်နိုင်မိန်းမဘွဲ့ကို ယူတော့သည်။ နှစ်ယောက်သား စည်းချက်ညီညီ လိုးနေကြ စဉ်… ကိုကိုမောင် တစ်ယောက် မဝေဝေခိုင်ကို (၃)ချီတိုင်တိုင် အားရအောင်လိုးပြီး နောက် မဝေဝေခိုင် ဖလပ်ပြသွားသည့်အတွက် ရပ်နား လိုက်သည်။ သည်တော့မှ ကေသွယ်မိုးနှင့် စာအတူကျက်ရန် ချိန်းထားသည် ကို သတိရ၏။ ပက်လက်ကြီးမှိန်းနေသော မဝေဝေခိုင်ကို ထားခဲ့၍ ပုဆိုးကပျာကယာဝတ်ကာ စာကျက်နေကျ ပန်းစက္ကူရုံသို့ အသော့ကလေးထွက်ခဲ့သည်။ကေသွယ်မိုး ‘လွယ်အိတ်ကလေး’ က စားပွဲခုံပေါ်ရောက်နေ၏။ ဟိုဟိုဒီဒီရှာ ကြည့်သည် မတွေ့။ အိမ်ထဲပြန်ဝင်သည်။ ဘာအရိပ်အရောင်မှ မတွေ့။ ဟား….သွားပြီ သူနှင့် မဝေဝေခိုင်တို့ လိုးနေတာကို ကေ သွယ်မိုး သိသွားပြီ။ ကိုကိုမောင် နောင်တအကြီးအကျယ်ရသွားသည်။ ပန်းစက္ကူရုံသို့ အပြေးတပိုင်းနှင့် သွား၏။ ကေသွယ်မိုး လွယ်အိတ်ကလေးကို ကောက်လွယ်လျှက် ကေသွယ်မိုး အိမ်ဖက်ထွက်ခဲ့သည်။ ကျေနပ်သည်အထိ ချော့ရပေ တော့မည်။ကေ သွယ်မိုးတို့အိမ်မှာ လူသူအရိပ်အယောင်ကင်းမဲ့ တိတ်ဆိတ်နေသည်။ လူကြီးတွေလည်း ရှိပုံမရ။
စိတ်ထဲပူသွားသည်။ နာကြည်း ချက်ကြောင့် ကြိုးဆွဲချသေနေမှဖြင့် တစ်သက်လုံး ယူကြုံးမရဖြစ်ရတော့မည်။ ပက်လက်ကုလားထိုင်ပေါ်တွင် မဂ္ဂဇင်းတစ်အုပ်တွေ့ခဲ့ သည်။ ကောက်မကြည့်နိုင်ဘဲ အိမ်ထဲဝင်လာခဲ့သည်။ ကေသွယ်မိုး အခန်းဆီ သို့ ချဉ်းကပ်လိုက်သည်။ အခန်းနားအရောက်တွင်…. “ သွယ်လေး….ကောင်းလားဟင်….”“ အင်း….အင်း…..အမ လေး….ကောင်း….ကောင်းတယ်…..ကိုထွန်း….အမလေး…..ဆောင့်….ဆောင့်….နာ…နာဆောင့်……အင့်……အ….ကျွတ်….ကျွတ်…..”ကြားလိုက်ရသောအသံက ကိုကိုမောင့်ရင်ဝကို လှံအစင်းပေါင်းတစ်ရာနှင့် တစ်ချက်တည်းအထိုးခံလိုက် ရသလို စူးနစ်ပူအောင့်သွား ၏။ ကေသွယ်မိုး အခန်းက ထရံနှင့်ကာထားသည်မို့ ချောင်းကြည့်စရာအပေါက်ကလေးတွေရှိနိုင်သည်။ သို့သော် မင်းသား မင်းသမီးပုံတွေ အပြည့်နီးပါးကပ်ထားသဖြင့် အပေါက်ကိုမတွေ့ဘဲဖြစ်နေသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာပင် ထောင့်စွန်းတစ်ခုကွာပြဲနေသောနေရာမှ အ တွင်းသို့ချောင်းကြည့်လိုက်သည်။ကေသွယ်မိုး တစ်ယောက် ခုတင်ပေါ်တွင် အဝတ်အစား လုံးဝမရှိဘဲ ဒူးထောင်ပေါင်ကားအနေအထားဖြင့် ပက်လက်ကြီးအလိုးခံကာ ဒူးထောက်လျှက် လိုးပေးနေသော သူ့ ခဲအို၏ခါးကို တင်းကျစ်နေအောင် ဖက်ထားသည်ကို ဘွားကနဲ မြင်လိုက်ရ၏။
“ အား….အမလေး…..ကောင်းလိုက်တာ ကိုထွန်းရယ်…..ညလည်း အခုလိုလိုးပေးအုံးနော်”“ အေးပါကွာ….စိတ်ချ”ကိုကိုမောင့် မျက်လုံးတွေ ပြာဝေသွား၏။ ရင်ထဲနာကျင်စူးအောင့်သွားသည်။ အသာလေးအခန်းနားက ခွာခဲ့သည်။ ပက်လက်ကုလား ထိုင်နား ရောက်သောအခါ မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ကို လှန်ကြည့်သည်။ အပြာစာအုပ်တစ်အုပ် ထွက်လာ၏။ အပြာစာအုပ်ကို မဂ္ဂဇင်းပေါ်တင်လျှက် ထိုအပေါ်မှ ကေသွယ်မိုး လွယ်အိတ်ကလေးကို တင်လိုက်သည်။ ထို့နောက် နှေးကွေးသောခြေလှမ်းတို့ဖြင့် ထွက်ခဲ့၏။ နှစ် ယောက်သား လိုးအားရသောအခါ အဝတ်အစားများပြန်ဝတ်၍ အပြင်ထွက်ခဲ့ကြသည်။ ကိုထွန်းလည်း မြို့ထဲသွားမည်ဟုဆိုကာ ထွက်သွား၏။ ပက်လက်ကုလားထိုင်ပေါ်မှာ ထိုင်မည်အပြု သူမလွယ်အိတ်ကလေးကို တွေ့ လိုက်ရသည့်အတွက် နှလုံးသွေးတွေ ချောက် ခြားမတတ် ထိတ်လန့်သွား၏။ ပန်းစက္ကူပင်အောက်မှာ သူမ မေ့ကျန်ခဲ့သော “ လွယ်အိတ်ကလေး ”။ ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged လှယျအိတျကလေး